“ Low Testosterone ဟော်မုန်း” အတွက်အမျိုးသားများအားကုသမှု - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2016; 11 (9): e0162480 ။
2016 စက်တင်ဘာ 21 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0162480
Samantha Huo,1 အန်သိုနီ R. Scialli,2,3 Sean McGarvey,2 အဲလစ်ဇဘက်ဟေးလ်,2 BuğraTügertimur,4 Alycia Hogenmiller,2 Alessandra ဗြဲ Hirsch က,5 နှင့် Adrian Fugh-Berman2,*
ဂျွန်ဆင် Rajasingh, Editor ကို
testosterone ထုတ်ကုန်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် "အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း" (အနိမ့်-T) ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ကြွက်သားအားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ပိန်, ခံစားချက်နှင့်အပြုအမူများနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသို့မဟုတ်ယူဆတုံ့ပြန်အချို့သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 156 အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု testosterone ဟော်မုန်းဤအခြေအနေများ၏တစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည့်အတွက်ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်မှုတွေ randomized ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဇန်နဝါရီလ 1, 1950 နှင့်ဧပြီလ 9, 2016 နှင့်ကာယဗလ, တားဆေးထိရောက်မှု, ဒါမှမဟုတ်အမြိုးသမီးမြားသို့မဟုတ်ကလေးငယ်များအတွက်မဆိုအခြေအနေကုသမှုပါဝင်သောဖယ်ထုတ်လိုက်လေ့လာမှုများအကြား bibliographic databases ကိုအတွက်လေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ မျိုးစုံသက်ဆိုင်ရာ Endpoints နှင့်အတူလေ့လာရေးအားလုံးသက်ဆိုင်ရာစားပွဲတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ testosterone ဖြည့်စွက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, စိတ်နှင့်အပြုအမူများသို့မဟုတ်သိမှတ်ခံစားမှုအဘို့အတသမတ်တည်းအကျိုးရှိမပြခဲ့ပါဘူး။ လက်တွေ့နှလုံးသွေးကြော Endpoints ဆန်းစစ်ကြောင်းလေ့လာရေးရလဒ်များအရအိပ်ယာကျော် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးမျက်နှာသာကြပြီမဟုတ်။ testosterone erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသအတွက်ထိရောက်မှုသည်နှင့်ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်မှုတွေလိင်စိတ်အပေါ်တစ်ဦးတသမတ်တည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမပြခဲ့ပါဘူး။ testosterone ဖြည့်စွက်တသမတ်တည်းကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ခံစားချက်-related Endpoints အပေါ်အများစုကလေ့လာမှုများကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ, ဒါမှမဟုတ်ခံစားချက်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုမျှမအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ testosterone ဟော်မုန်းနှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကိုအနိမ့်-T ကများအတွက်ဖြည့်စွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ခံစားချက်, ဒါမှမဟုတ်သိမြင် function ကို၏ဆေးညွှန်းကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေထံမှထောက်ခံမှုမပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Testosterone နဲ့ methyltestosterone မွေးရာပါသို့မဟုတ်ဝယ်ယူ hypogonadism နှင့်အတူယောက်ျားများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စျေးကွက်နေကြသည်။ တချို့ကဆရာ "အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း" (အနိမ့်-T) ကိုသူတို့, တစ်ပုံစံတည်းသတ်မှတ်ရသေးကြောင်းအသုံးအနှုန်းအဖြစ်ဖော်ထုတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးဆက်ဆံဖို့ testosterone ဟော်မုန်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်မလှုပ်မရှားနှိုင်းယှဉ်နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများတွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ကြွက်သားအားနည်းခြင်း / ပိန်, ခံစားချက်နှင့်အပြုအမူများသို့မဟုတ်အခြားသောကောင်းကျိုးဆန့်ကျင် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံး၏အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ကြောင်း randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေ (RCTs) ၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်တင်ပြ။ ကျနော်တို့ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားသောဝှေးနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း၏လေ့လာမှုများ, သို့မဟုတ်သူအ Klinefelter syndrome ရောဂါသို့မဟုတ်အခြားမျိုးဗီဇကွဲလွဲချက်များခဲ့မပါဝင်ခဲ့ချေ။ ကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေအတွက်မဆိုအရိပ်အယောင်, ဓတေားအတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေ, ကာယဗလသို့မဟုတ်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏အသုံးပြုမှုများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းများအသုံးပြုမှုအပေါ်လေ့လာမှုများမပါဝင်ခဲ့ချေ။
2.1 ဒေတာများရှာဖွေရန်, Synthesis နှင့်သုံးသပ်ခြင်း
Computerized စာပေရှာဖွေမှုများကို PubMed, Embase နှင့်ယား PsycNET အတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ရှာဖွေမှုလူ့အထီးကန့်သတ်ခံခဲ့ရပေမယ့်ဘာသာစကားသို့မဟုတ်ရက်စွဲခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်မခံခဲ့ရပါ။ အဆိုပါ PubMed ရှာဖွေရေးအတွက် MeSH ဝေါဟာရကို "testosterone ဟော်မုန်း" နှင့် modifiers "အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သောက်သုံးသော", "ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ", "ချို့တဲ့", "စံချိန်စံညွှန်းများ," "ကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်း," သို့မဟုတ်သုံးပြီးကောက်ယူခဲ့ပါတယ် "ကုထုံး။ " မူရင်း PubMed ရှာဖွေရေးကောက်ယူခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 1, 1950 နှင့်နိုဝင်ဘာလ 26, 2013 အကြားထုတ်ဝေလေ့လာမှုများအဘို့။ အဆိုပါ Embase ရှာဖွေရေး "ဆိုးရွားသောမူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်မှု," "အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့", "ကုထုံး", "မူးယစ်ဆေးထိုး," သို့မဟုတ် "လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကပြုပြင်မွမ်းမံသည့် Emtree key ကိုဝေါဟာရကို" testosterone ဟော်မုန်း "ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်။ " မူရင်း Embase ရှာဖွေရေးလေ့လာမှုများအဘို့ကောက်ယူခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 1, 1974 နှင့်နိုဝင်ဘာလ 26, 2013 အကြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါ PsycNET ရှာဖွေရေး "စွဲ", "မူးယစ်ဆေးမှီခို", "ကုထုံး", "ကုသမှု," သို့မဟုတ် "ချို့တဲ့နေဖြင့်ပြုပြင်ထားသောဟူသောဝေါဟာရကို" testosterone ဟော်မုန်း "ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်။ " မူရင်း PsycNET ရှာဖွေရေးဇန်နဝါရီလ 1 အကြားထုတ်ဝေလေ့လာမှုများအဘို့ကောက်ယူခဲ့ 1806 နှင့် နိုဝင်ဘာလ 26, 2013 ။ အားလုံးရှာဖွေမှုများကိုကနဦးရှာဖွေရေးကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့, ဧပြီလ 9, 2016 အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ, ဒါနောက်ဆုံးရှာဖွေရေးအားလုံး Database ကနေစမ်းသပ်မှုတွေထက်ပိုလေးဆယ်စုနှစ်ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များ EndNote အသုံးပြု. ပေါင်းစပ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ထပ်တူများကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤရလဒ်သည်သော့ချက်ဝေါဟာရကိုသုံးပြီး filtered ခဲ့ကြသည် "လက်တွေ့စမ်းသပ်။ " ခေါင်းစဉ်များနှင့် abstraction RCTs ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဆီလျှော်လေ့လာမှုများပပျောက်ဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။
2.3 ဒေတာများကို Extraction
ဒေတာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အချက်အလက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ကြွက်သားအားနည်းခြင်း / ပိန်, ခံစားချက်နှင့်အပြုအမူများသို့မဟုတ်သိမှတ်ခံစားမှုအရသိရသည်4လွတ်လပ်သောသုံးသပ်ရေးနေဖြင့်စားပွဲသို့ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ မျိုးစုံသက်ဆိုင်ရာ Endpoints နှင့်အတူလေ့လာရေးအားလုံးသက်ဆိုင်ရာစားပွဲတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းဆောင်းပါးများကိုဖော်ထုတ်နှင့်ထုတ်ယူ, သူတို့ရဲ့ရည်ညွှန်းစာရင်း RCTs ၏မူလတန်းစာပမြေားကိုရှာဖွေကြ၏။
ပါဝင်သည်အချို့လေ့လာမှုများထိန်းချုပ်ထားဒီဇိုင်းများကိုလည်း Open-တံဆိပ်ဆက်လက်ဆင့်ပါဝင်သည် randomized ။ ကျနော်တို့အကဲဖြတ်နှင့်ဤလေ့လာချက်များ၏ randomized ထိန်းချုပ်ထားဝေမျှအကျဉ်းချုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းအကျိုးစီးပွား hypogonadism ၏ကုသမှုများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းများအသုံးပြုခြင်းခဲ့ပေမယ့်, သို့သော်လေ့လာမှုစာရေးဆရာများအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်ကျနော်တို့ eugonadal အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း၏စမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည်။ အချို့လေ့လာမှုတွေမှာတော့ eugonadal ဘာသာရပ်များ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ် (များသောအားဖြင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) ကိုလက်ခံရရှိရန် randomized ဖြစ်. , hypogonadal ဘာသာရပ်များသာ testosterone ဟော်မုန်းနဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့အကဲဖြတ်နှင့်ဤလေ့လာမှုကိုသာကျပန်းဝေမျှအကျဉ်းချုံး။
ကျနော်တို့က 5-အမှတ် Jadad ရမှတ်အားဖြင့်လေ့လာမှုများ၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်။ တတ်နိုင်သမျှအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့မခွဲခြားဘဲ Jadad ရမှတ်များဖော်ထုတ်အားလုံးလေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ လက်တွေ့ Endpoints သာ (angina / ischemia, ပိတ်ဆို့မှုကိုနှလုံးပျက်ကွက်ခြင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) အတွက်ငါတို့သည်လည်း4သို့မဟုတ်5၏ Jadad ရမှတ်ကန့်သတ်လေ့လာမှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းသတ်မှတ်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုစာရေးဆရာများကအသုံးပြုခဲ့ကြသမျှစံလက်ခံခဲ့သည်။
သင်္ဘောသဖန်း 1 abstraction ပြန်လည်သုံးသပ် 226 ထံမှ 11,417 ခြေစစ်ပွဲစာတမ်းများကိုရွေးဖို့အသုံးပြုတဲ့ဖယ်စံစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ randomized အဖြစ်အများဆုံးလေ့လာမှုများ၎င်းတို့၏စာရေးဆရာများအားဖြင့်ဖော်ပြထားပေမဲ့, အားလုံးမဟုတ်ကျပန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏သဘောသဘာဝညွှန်ပြ။ အချို့လေ့လာမှုများခွဲဝေကျပန်းမဟုတျကွောငျးအကြံပြုခြင်း, ကုသမှုထဲမှာဘာသာရပ်များနှင့်ထိတွေ့အခြေအနေများ၏တူညီနံပါတ်များပါဝင်သည်။ နောက်ထပ်စာမေးပွဲပြီးနောက် 70 စာတမ်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဘူး, ဒါနောက်ဆုံးဒေတာအစု 156 စာတမ်းများလည်းပါဝင်သည်။
စားပွဲတင် 1 ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ခဲအမှတ်အသားများအပေါ်ထုတ်ယူ lipids အပေါ်ပိတ်ဆို့မှုကိုနှလုံးပျက်ကွက် (CHF) ရက်နေ့တွင် ischemia / angina, 17 အပေါ်6လေ့လာမှုများအပါအဝင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ Endpoints ပေါ်တွင် testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းလေ့လာမှုများ, 25 နှင့် 11 အကျဉ်းချုပ်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ Endpoints အပေါ် testosterone ၏ဆိုးကျိုးများ။
သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါ (CAD) နဲ့လူနာအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်းလေ့လာမှုများများတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီယောက်ျားယေဘုယျအားဖြင့်တည်ငြိမ် angina, သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြော occlusive အချို့ကိုဒီဂရီ, ဒါမှမဟုတ် myocardial infarction (MI) ၏သမိုင်း၏ angiographic သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုစာရေးဆရာများဖြစ်စေဆေးပညာ hypogonadism အထောက်အထားသတင်းပို့သောယောက်ျားပါဝင်ပတ်သက်ခြောက်လလေ့လာမှုများ  သို့မဟုတ်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး [2-6]; ကျန်ရှိသောပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲယောက်ျားပါဝင်သည်။ အားလုံးပေမယ့်လေ့လာမှုသုံးဘရုစ် protocol ကိုတစ်ပြုပြင်မွမ်းမံသုံးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်မှုအပေါ် ST-segment ကိုစိတ်ကျရောဂါအကဲဖြတ်။ အဆိုပါဘရုစ် protocol ကိုအသုံးမပြုလေ့လာမှုတစ်ခုမှာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု protocol ၏သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲ, electrocardiography (ECG) နှင့် Holter စောင့်ကြည့်မှုအပေါ်တွေ့ရှိချက်များအကဲဖြတ်။  နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအမည်တပ်ထားသော perfusion tracer ၏ myocardial လွှာမှအတွက်လိုငွေပြမှုများအတွက်အကဲဖြတ်ရန်မှ Single-ဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်ကွန်ပျူတာ tomography (SPECT) ကဆက်ပြောသည်။  တစ်ခုမှာလေ့လာမှုကိုအသုံးပြုသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) myocardial perfusion ၏ခန့်မှန်းချက်။  တစ်ခုမှာလေ့လာမှု Testosterone နဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကြားမျှခြားနားချက်ဖေါ်ပြခြင်း, အချိန်ကျော်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောကယ်လစီယမ်ရမှတ်အတွက်အပြောင်းအလဲအကဲဖြတ်။ 
CAD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ဒေသခံ vasodilators မှ sensitivity ကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်အတိုင်း occlusive ၏လွှတ်ပေးရန်နှင့်တိုက်ရိုက်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောဖြေရှင်းမပေးခဲ့ပါဘူး brachial သွေးလွှတ်ကြောတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ; နှစ်ဦးစလုံး testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးမှအဆင်သင့်ရလဒ်များကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ [9, 10] bioavailable testosterone ဟော်မုန်းနည်းပါးသောကျန်းမာသောယောက်ျားများအားလေ့လာမှုနှစ်ခုဖြစ်သော <4.44 nM (128 ng / dL) သို့မဟုတ်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်း≤15 nM (432 ng / dL) သည် transdermal testosterone သို့မဟုတ် dihydrotestosterone ကုထုံးကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် brachial artery reactivity ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။5, 11တစ်ဦး unobstructed သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောများကထောက်ပံ့သူတွေကို segments များ၏တိုးလာ perfusion ရှိခဲ့ပေမယ့်] MRI အသုံးပြုခဲ့တဲ့အဆိုပါလေ့လာမှု, myocardial perfusion အပေါ်ပါးစပ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ကုထုံး၏ 8 ရက်သတ္တပတ်၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်။ 
သုံးလေ့လာမှုများစမ်းသပ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပဲကြိုတင်သွေးကြောသွင်း (IV) testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူစူးရှသောကုသမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုနှစ်ဦးကို ST-segment ကိုစိတ်ကျရောဂါဖို့အချိန်ပေါ်ကုသမှုမျက်နှာသာသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ [2, 12] တစ်ခုမှာလေ့လာမှု ischemia ၏ ECG သို့မဟုတ် SPECT သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်။  တစ်နှစ်ကြာကြာလေ့လာမှု ST-segment ကိုစိတ်ကျရောဂါအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြတော်မူ၏။  ကြာချိန်အတွက်2ရက်သတ္တပတ်မှ 24 ၏ကုသမှုအကဲဖြတ်ကျန်ရှစ်လေ့လာမှုများ။ [1, 3, 10, 11, 13-17] ST-segment ကိုစိတ်ကျရောဂါဖို့အချိန်ကြည့်ရှုသော3လေ့လာမှုများ testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [1, 14, 16]
2 လေ့လာမှုများ [testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုကာလအတွင်းသို့မဟုတ်အပြီးတွင် angina လက္ခဏာတွေအတွက်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်7, 15]4လေ့လာမှုများ angina အပေါ်ကုသမှုမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်။ [1, 4, 8, 16] အများစုမှာလေ့လာမှုများ angina ရောဂါလက္ခဏာတွေမဆိုအတိုင်းအတာသတင်းပို့ခဲ့ပါဘူး။ arteriosclerosis မှစွပ်စွဲခြေထောက် claudication သို့မဟုတ် trophic အနာနှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု testosterone ဟော်မုန်းကုထုံး၏3လအကြာတစ်ခုပုဂ္ဂလဒိဋ္လက္ခဏာတွေအတွက်တိုးတက်မှု, လမ်းလျှောက်, ဒါမှမဟုတ်သွေးစီးဆင်းမှု Endpoints ၏ plethysmographic ခန့်မှန်းချက်မပြခဲ့ပေ။ 
1 လေ့လာမှုမှာ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုနှင့်အတူတိတ်ဆိတ် MI တစ်လျော့နည်းသွားဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်။  ယောက်ျား 65 အသက်နှင့်အထက်အတွက်အနိမ့်-စှအစွမ်းသတ္တိ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းနောက်ထပ်လေ့လာမှုကြောင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များကိုတစ်ဦးပိုလျှံမှဘုတ်အဖွဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းတစ်ဒေတာနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအားဖြင့်အစောပိုင်းရပ်တန့်ခဲ့သည်။  ဤဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များကိုအခြားသူများအကြားစူးရှသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ (ACS), MI, ECG မူမမှန်ခြင်း, ပုံမမှန်ခြင်း, ပါဝင်သည်။
သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါက Eleven လေ့လာမှုများ Jadad စကေးအပေါ်4သို့မဟုတ်5သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ဦးရလဒ်ကိုတစ်အကျိုးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့အဖြစ် angina ပါဝင်သည်ဤ, တစ်ဦးတည်းသာငါးခု၏လေ့လာမှုများ၏။ ST အစိတ်အပိုင်းစိတ်ကျရောဂါအကဲဖြတ်ကြောင်းလေးငါးလေ့လာမှုများတစ်အကျိုးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ခြောက်လလေ့လာမှုများ CHF အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ [18-23] တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကနေနှစ်ခုစာတမ်းများ [ခုနှစ်တွင်19, 20] ဒါကြောင့်ကုသမှုကျပန်းတာဝန်ကျရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ အဆိုပါ buccal လမ်းကြောင်းများက testosterone ဟော်မုန်း၏အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုစူးရှပြန်ပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ကိုက်ညီလူတန်းစား catheterization setting ကိုအတွက်နှလုံးအညွှန်းကိန်းများနှင့်စနစ်တကျသွေးကြောအညွှန်းကိန်းအပေါ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။  12 ပတ်အသား (IM) testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုလက်ဝဲ ventricular အရွယ်အစားသို့မဟုတ်ထွတ်အစိတ်အပိုင်း (EF) ရက်နေ့တွင်သတ်မှတ်သက်ရောက်မှုမရှိဘဲလေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းရည်နှင့်လျှော့ချနှလုံးပျက်ကွက်လက္ခဏာရမှတ်များတိုးတက်လာသည်။  CHF နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ထားတဲ့ IM testosterone ဟော်မုန်း၏နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ရပ်အောက်စီဂျင်စားသုံးမှုအတွက်တိုးတက်မှု, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာထိရောက်မှု (လေဝင်လေထွက် / ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု) ပြပြီး, အကွာအဝေး EF သို့မဟုတ်လက်ဝဲ ventricular အဆုံး-diastolic အချင်းပြောင်းလဲမှုများမပါဘဲ 10 မိနစ်သွားလာ၏။  လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုသည်အခြေခံသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း <12 ng / mL (~4nM) နှင့်အတူအမျိုးသားများ၏တုန့်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် shuttle walk test ၏တိုးတက်မှုကိုပြသည်။23တစ်ဦး Doppler-based myocardial စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်] နောက်ထပ်လေ့လာမှု, ထွတ်အစိတ်အပိုင်းအပေါ်ထားတဲ့ IM testosterone ဟော်မုန်း enanthate မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ 
Jadad အပေါ်တစ်ဦး3အထက်သွင်းယူသောသာလေ့လာမှု CHF အစီအမံအပေါ်တစ်ဦးအကျိုးကျေးဇူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 
သူတို့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏အမှတ်အသားများအဘို့အမှားမဖြစ်သင့်ပေမယ့်လက်စထရောအပိုငျး, triglyceride နှင့်လစ်ပိုပရိုတိန်း၏သွေးရည်ကြည်သို့မဟုတ်ပလာစမာပြင်းအား, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအတွက်အငှား Endpoints အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အတွက်အကျဉ်းချုပ်အဖြစ် 25 လေ့လာမှုများများတွင် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု, ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲရှုံးသောအခါ, ဒါမှမဟုတ် lipids မဆိုးကျိုးများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် စားပွဲတင် 1။ 11 လေ့လာမှုများအတွက်အဆင်သင့်သက်ရောက်မှုစုစုပေါင်းလက်စထရောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် variable ကိုများနှင့်ကိုက်ညီမှုလျှောက်လျော့နည်း triglyceride နှင့်အနိမ့်သိပ်သည်းဆလစ်ပိုပရိုတိန်း (LDL) လက်စထရောအတွက် 5-11% လျှောက်လျော့နည်းပါဝင်သည်။ တစ်ဦးသာကိုင်သာရှိတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းကဲ့သို့မှတ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာစုစုပေါင်းသို့မဟုတ် High-density ကိုလစ်ပိုပရိုတိန်း (HDL) လက်စထရောလ်သို့မဟုတ် triglyceride အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုသရုပ်ပြပေမယ် LDL လက်စထရောတစ် 13% လျှော့ချရေးအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိပေ။  ဒီတွေ့ရှိချက် 1 ယခုနှစ်သင်တန်းထက်ကုသမှုကာလရဲ့အဆုံးမှာတိုးတက်လာသော lipid တိုင်းတာတဲ့ပြဌာန်းခွင့်အပေါ်အများအပြားထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာပျမ်းမျှအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။
ကြားမှခါကာဘိုရာဇီအပြောင်းအလဲများ [2 လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်5, 25] နှင့်စုစုပေါင်းလက်စထရော, LDL လက်စထရောနှင့် triglyceride အတွက်တိုးမြှင့်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကြိုတင်အန်ဒရိုဂျင်ကုထုံးမှ hypogonadal အဖြစ်အကဲဖြတ်ယောက်ျားအတွက် HDL လက်စထရောအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ lipids အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲသက်ရောက်မှုသတင်းပို့မပြုခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုများအများစုဟာအားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေတစ်ခုမှာ  လစ်ပိုပရိုတိန်း-တစ်ဦး (LP-က) တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအစီရင်ခံဒါပေမဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်ယာယီခဲ့မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲမျိုးစုံလူနာလူမျိုးကွဲအတွက်မျိုးစုံအချိန်အချက်များမှာအများအပြားတိုင်းတာနဲ့လေ့လာမှုမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ lipids အပေါ်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကွောငျး 11 လေ့လာမှုများကိုး4သို့မဟုတ်5၏ Jadad ရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ lipids အပေါ်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲသက်ရောက်မှုရှိကြသော 14 လေ့လာမှုများကိုး4သို့မဟုတ်5၏ Jadad ရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။
testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုရဲ့ lipid သက်ရောက်မှုအပေါ်လေ့လာမှုများအကြားစိတ်တိုးပွားမှီခိုလမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာမပေးခဲ့ပါဘူး။ ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းတို့သည် 11 လေ့လာမှုများခုနစ် testosterone ဟော်မုန်း enanthate, Ester, ဒါမှမဟုတ် undecanoate ၏ထားတဲ့ IM ဆေးထိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ lipids အပေါ်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ဘဲ 14 လေ့လာမှုငါးခု testosterone ဟော်မုန်း Ester, cypionate, ဒါမှမဟုတ် undecanoate ၏ထားတဲ့ IM ဆေးထိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
က Eleven လေ့လာမှုများ atherosclerotic နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ခဲ့ကြကြောင်းအမှတ်အသားများ testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ် dihydrotestosterone ကုထုံးကိုသုံးပြီးအမျိုးသားများတွင်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်ရသောဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သုံးလေ့လာမှုများအကျိတ် necrosis အချက်-α (TNF-α), ရောင်ရမ်းနေတဲ့အမှတ်အသားပေါ်မှာ testosterone ဟော်မုန်း၏ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲသက်ရောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ [1, 3, 27] CHF နှင့်အတူလူတစျဦးကလေ့လာမှု TNF-α၏သွေးရည်ကြည်စူးစိုက်မှုအပေါ် buccal, IM, ဒါမှမဟုတ် transdermal လမ်းကြောင်းများက testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်။  လေ့လာမှုတစ်ခုမှာရောင်ရမ်းအမှတ်အသား Interleukin-1β (IL-1β) တွင်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းရှိကွောငျးကိုအခိုင်အမာပေမယ့်တစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုပြမခံခဲ့ရပါ။  နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခု Interleukin-6 (IL-6) တွင်ကျဆင်းခြင်းနှင့် C-reactive protein နောက်ထပ်ရောင်ရမ်းအမှတ်အသားများပြသသည်။  CAD တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမပါဘဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်နှင့်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများလူဖျော်ဖြေနှစ်ဦးလေ့လာမှုများ [C-reactive protein အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးမရှိပါအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသ29, 30] အမျိုးအစား2များတွင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူယောက်ျား၏နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများပြုသကဲ့သို့။ [31, 32] Transdermal dihydrotestosterone အနိမ့်စုစုပေါင်း pretreatment testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုနှင့်အတူလူရောင်ရမ်းအမှတ်အသားများမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။  အဘယ်သူမျှမ fibrinogen အတွက်ပြောင်းလဲမှု, plasminogen Active inhibitor-1, ဒါမှမဟုတ်တစ်သျှူး plasminogen Active testosterone ဟော်မုန်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဆေးများကိုအသုံးပြုတဲ့သူ CAD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ပြသခဲ့သည်။ [3, 34]
တစ်မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းအဆုံးမှတ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသို့မဟုတ်လိင်စိတ်အကဲဖြတ်သော 48 လေ့လာမှုများအတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် စားပွဲတင် 2။ လေ့လာမှုလူဦးရေ "hypogonadal," သာမန်ယောက်ျားနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား (ED) အဖြစ်လေ့လာမှုစာရေးဆရာများအားဖြင့်ဖော်ထုတ်ယောက်ျားပါဝင်သည်။ လေ့လာရေး [စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားပါဝင်သည်35-37] နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာရောဂါ,  အသည်းခြောက်  သွေးလွှတ်ကြောမလုံလောက်  ကင်ဆာ,  ဆီးချိုရောဂါ  HIV ပိုး [35, 41] အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ,  နှင့်နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ (COPD) ။  ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုထားတဲ့ IM (ဎ = 16), ပါးစပ် (ဎ = 11), လိမ်းလိမ်းဆေးသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက် (ဎ = 14), patch ကို (ဎ = 5), နှင့် buccal (ဎ = 1) ဖော်မြူလာပါဝင်သည်။ လေ့လာရေး Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF) အပါအဝင်မေးခွန်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြု, Frenken လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအကြေးခွံ, Derogatis လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်စကေး (DSPS), ပုအိုမင်းခြင်းဟာအထီး '' ရောဂါလက္ခဏာများ (AMS) စကေးအမျိုးသားလိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာ, Psychosexual နေ့စဉ်မေးခွန်းလွှာ, လေ့လာ-တိကျတဲ့မေးခွန်း။ လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာများလက္ခဏာတွေများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားကိုသုံး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အုပ်စုဖွဲ့ဥပမာ, "လိင်စိတ်," "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုး," နှင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ "
လိင်စွမ်းရည်အပေါ် testosterone ၏ဆိုးကျိုးများ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်ကြောင်း 47 လေ့လာမှုများ၏, 23 လေ့လာမှုများ [, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုအနည်းဆုံး 1 အတိုင်းအတာအဘို့အ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်6, 26, 35, 37, 40, 43-60] နှင့် 24 လေ့လာမှုများမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအဆုံးမှတ်အတွက် testosterone ဟော်မုန်း-ဆက်စပ်တိုးတက်မှုမပြခဲ့ပေ။ [24, 36, 38, 39, 41, 42, 61-78] ငါတို့ကဲ့သို့အပြုသဘောဆောင်ရေတွက်သုံးလေ့လာမှုများရောနှောခဲ့ကြသည်: Steidle et al ဂျယ်လ်, Legros et al ၏ 100 မီလီဂရမ် 40 နှင့်အတူတိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းမ 3နှုတ်အုပ်ချုပ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate (60 မီလီဂရမ်, 160 မီလီဂရမ်နှင့် 240 မီလီဂရမ်) ၏အဆင့်ဆင့်ထိုးနှင့်သာအလယ်မှာထိုးများအတွက်အကျိုးရှိတွေ့ရှိခဲ့နှင့် Hackett et al စမ်းသပ်ပြီး  testosterone ဟော်မုန်း testosterone ဟော်မုန်း 8.0-8.1 nm နှင့်အတူအုပ်စုတစုအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုစိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အ testosterone ဟော်မုန်း≤12 nm အတူအုပ်စုတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်မပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခု "အချို့ဘာသာရပ်များအတွက်တိုးမြှင့်ကြွက်သားစွမ်းအင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားမှုကဖော်ပြခဲ့သည်" ။  ရှိတယ် (ငါတို့အားဖြင့်ဖျော်ဖြေ) Fischer အတိအကျကိုစမ်းသပ်နေဖြင့်အုပ်စုများအကြားမျှခြားနားချက်ကြီးနှင့်ကျွန်တော်ထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဤလေ့လာမှုဖယ်ထုတ်လိုက်။ 30 သို့မဟုတ်4၏ Jadad ရမှတ်များနှင့်အတူ5လေ့လာမှုများမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကန့်သတ်အလားတူရလဒ်များ; 14 အပြုသဘောနှင့် 16 အနုတ်လက္ခဏာရှိကြ၏။
erectile function ကိုအကဲဖြတ်ကြောင်း 31 လေ့လာမှုများ၏, 15 [testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမတိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့6, 26, 39, 41, 55, 59, 62, 64, 65, 68, 70-72, 76, 77] နှင့် 16 တစ်အကျိုးကျေးဇူးကဖော်ပြခဲ့သည်။ [35, 37, 43-52, 56, 58, 60] ချင်းမိုင် et al အားဖြင့်လေ့လာမှုဖြစ်သော်လည်း  အခြေခံနှိုင်းယှဉ် Testosterone နဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှစ်ဦးစလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးအစီရင်ခံ; သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုသမှုအုပ်စုများအကြားတစ်ဦးခြားနားချက်မပြခဲ့ပါဘူး။ 17 သို့မဟုတ်4၏ Jadad ရမှတ်များနှင့်အတူ5လေ့လာမှုများမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကန့်သတ်အလားတူရလဒ်များ;9အပြုသဘောတို့ 8 အနုတ်လက္ခဏာရှိကြ၏။
တကျိပ်နှစ်ပါးသောလေ့လာမှုများ ED နှင့်အတူယောက်ျားပါဝင်သည်; 8 [ရလဒ်များအရအိပ်ယာကျော် testosterone ဟော်မုန်းမရှိအကျိုးကျေးဇူးကိုတွေ့55, 59, 62, 64, 68, 72, 74, 76] နှင့်4တစ်အကျိုးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [35, 46, 47, 49] တစ်ခုမှာအနုတ်လက္ခဏာလေ့လာမှုရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ testosterone ဟော်မုန်း erectile function ကိုလျှော့ချတွေ့ရှိခဲ့; သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က၎င်း၏အခြေခံနှိုင်းယှဉ်သောအခါအဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှုရှိ၏။ 
အထူးသလိင်စိတ်ပြောင်းလဲမှုများအစီရင်ခံကြောင်း 23 လေ့လာမှုများ၏, 13 [testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုလိင်စိတ်တိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရ26, 35, 37, 45, 46, 54, 56, 60, 63, 65, 70, 77, 79] ရှစ် [မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့24, 38, 39, 47, 59, 67, 75, 76] နှင့် 13သော်လည်းမကုသ6လအကြာတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  Hackett et al  testosterone ဟော်မုန်းကနဦး testosterone ဟော်မုန်း 8.0-8.1 nm အတူအုပ်စုတွင်ကနဦး testosterone ဟော်မုန်း≤12 nm အတူအုပ်စုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးတက်သော်လည်းမတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
က Eleven လေ့လာမှုများလိင်စိတ်နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်3မေးခွန်းများကိုလည်းပါဝင်သည်သောအိုမင်းခြင်းဟာအထီး '' ရောဂါလက္ခဏာများစကေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါးလေ့လာမှုများ [စုစုပေါင်းရမှတ်အပေါ် Testosterone နဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကြားမျှကွာခြားချက်ကိုတွေ့26, 54, 57, 72, 76] နှင့်4လေ့လာမှုများ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုအကျိုးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [52, 57, 58, 66] တစ်ခုမှာစက္ကူ  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ subscales သော်လည်းမစုစုပေါင်း AMS ရမှတ်များသာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ AMS စကေး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ subscale တွင်, ဒီလေ့လာမှု [တဲ့အကျိုးကျေးဇူး, Ho et al အစီရင်ခံတင်ပြ73] [မျှအကျိုးကျေးဇူးကိုတွေ့နှင့် Legros et al57] 160 အချိန်မှတ်၏3မှာ3ထိုးအဆင့်ဆင့်၏ (4 မီလီဂရမ်) ကိုသာအလယ်တန်းအတွက် AMS လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ subscale အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုအကျိုးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Hackett et al  testosterone ဟော်မုန်းကနဦး testosterone ဟော်မုန်း 8.0-8.1 nm အတူအုပ်စုတွင်ကနဦး testosterone ဟော်မုန်း≤12 nm အတူအုပ်စု AMS ရမှတ်များတိုးတက်သော်လည်းမတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
13 သို့မဟုတ်4တစ် Jadad ရမှတ်နှင့်အတူလိင်စိတ်သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒအပေါ်လေ့လာမှုများ၏5ဆယ်တစ်အကျိုးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 12 သို့မဟုတ်4တစ် Jadad ရမှတ်နှင့်အတူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်5လေ့လာမှုများခုနစ်ယောက်တစ်အကျိုးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
3.3 ကြွက်သားအားနည်းချက် / စွန့်ပစ်
စားပွဲတင်339 နှင့်အတူကျန်းမာယောက်ျားအပေါ်ပုံမှန်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူ HIV အနှုတ်ယောက်ျားအပေါ်အနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း, 19 ရှိခြင်းအဖြစ်အကဲဖြတ်ယောက်ျားအတွက်9အပါအဝင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ကြောင်း 1 လေ့လာမှုများ, ကြွက်သားခွန်အားသို့မဟုတ် HIV ပိုး-ဆက်စပ်ကြွက်သားပိန်, အကျဉ်းချုပ် ပုံမှန်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့် 10 HIV ပိုးယောက်ျားပေါ်မှာ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသို့မဟုတ်ကြွက်သားခွန်အားအစီအမံမပါဘဲ (HIV ပိုး-ဆက်စပ်ပိန်အတွက်ထက်အခြား) သာခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုတိုင်းတာကြောင်းလေ့လာရေးဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ hypogonadal နှင့်ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုရှိသည်ဖို့စဉ်းစားသူတွေကိုအဖြစ်စာရေးသူအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးသူတို့အားပါဝင်သည်။ ကြွက်သားခွန်အားဘုံအစီအမံဟာခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်းနှင့်ခြေထောက်စာနယ်ဇင်းအပါအဝင်လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ချုပ်ကိုင်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ dynamometry နှင့် 1-အထပ်ထပ်အများဆုံးပါဝင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုမကြာခဏတိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးလမ်းလျှောက်ခြင်း,6မိနစ်လမ်းလျှောက်စမ်းသပ်မှု, 25 ခွကေိုလမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်ခြေလှမ်းများ၏အချိန်နှင့်အရေအတွက်နှင့်ကုလားထိုင်မှထမွောကျစွမ်းရည်တန်ဖိုးသော get-Up-and go စမ်းသပ်မှုဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည် နှင့်ထိုင်လျက်ပြန်သွားပါ။
ကြွက်သားအားနည်းချက် / စွန့်ပစ်အပေါ် testosterone ၏ဆိုးကျိုးများ။
ကျန်းမာဘာသာရပ်များအကဲဖြတ်သူတို့၏အမျိုးအ 11 အတူ hypogonadal အဖြစ်ဖော်ပြဘာသာရပ်များအကဲဖြတ်နှစ်ဆယ်လေ့လာမှုများ။ ငါးလေ့လာမှုများ [ ", အထိုင်များ" အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြို့တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့န့်အသတ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအမျိုးအစားပေါ် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်53, 80-83] နှင့်တစ်ခုတည်းလေ့လာမှုများ [COPD နှင့်အတူဘာသာရပ်များအကဲဖြတ်84] [ကင်ဆာ advanced75] နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါ။  ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုရှိသည်ဖို့စဉ်းစားဘာသာရပ်များအကဲဖြတ်ဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ; 1 လေ့လာမှုကျန်းမာ, သက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားပါဝင်သည်နှင့်ကျန်ရှိသောစီစဉ်ထားဒူးအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များပါဝင်ပြီး  တည်ငြိမ် CHF [18, 22, 87] ခြေထောက် claudication သို့မဟုတ်အနာ  ရေရှည် glucocorticoid ကုထုံး  myotonic dystrophy,  သွေးလွှတ်ကြောမလုံလောက်  COPD  ဘယ်သူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီစဉ်သို့မဟုတ်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ 
ဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ HIV ပိုးနှင့်အတူဘာသာရပ်များအကဲဖြတ်; သူတို့အားလေ့လာမှု 8 HIV ပိုး-ပိန်နှင့်အတူဘာသာရပ်များပါဝင်ပြီး, 1 ဝမ်းဗိုက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များပါဝင်ပြီးနှင့် 1 အလေးချိန်သတ်မှတ်ချက်ကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။ ဤအစာတမ်းများအများစုမှာအသက်ကြီးလေ့လာခဲ့သည်။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ 60 နှစ်ပေါင်းထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။
ကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြွက်သားထုထည်တစ်ခုသိသိသာသာတိုးဖေါ်ပြခြင်းကဤလေ့လာမှု 22 (81%) နှင့်အတူ, ကြွက်သားထုထည်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု၏သက်ရောက်မှုတိုင်းတာနှစ်ဆယ်ခုနစ်လေ့လာမှုများ။ [41, 43, 53, 80-84, 88, 89, 91-102] သည်ဤလေ့လာမှု 22 ၏တစ်ဆယ့်ကိုး (86.3%)4သို့မဟုတ်5တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဆယ်ငါးလေ့လာမှုများကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်အဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းဖေါ်ပြခြင်းကဤလေ့လာမှု 15 (60%) နှင့်အတူ, အဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုရဲ့သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ [11, 43, 53, 81, 83, 84, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 103] သည်ဤလေ့လာမှုဆယျ့နှစျ4သို့မဟုတ်5တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အချို့လေ့လာမှုများအထူးသကြွက်သားနှင့်အဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုင်းတာဒါပေမဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှု Endpoints အသုံးမကြဘူး။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ [ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ် BMI မအပြောင်းအလဲများပြသ22, 104] ပေမယ့်အခြားခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့် BMI အတွက်တိုးပြသခဲ့သည်။ 3တစ် Jadad ရမှတ်နှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခု, အလေးချိန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာအဆီခန့်မှန်းမပြောင်းလဲမှု (triceps နှင့် scapula skinfold အထူ) ပြသခဲ့သည်။  ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူ HIV ပိုးယောက်ျား၏လေ့လာမှုများခုနှစ်တွင်, (3 သို့မဟုတ်6၏ Jadad ရမှတ်များရှိခဲ့အားလုံးပေးသော၏)4လေ့လာမှု5[testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုနှင့်အတူအလေးချိန်တစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်99, 101, 106] နှင့်ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုင်းတာသောသူအပေါင်းတို့သည်4လေ့လာမှုများတစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်။ [41, 99-101]
တစ်မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းအဆုံးမှတ်အဖြစ်ကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိကိုအကဲဖြတ်သော 30 လေ့လာမှုများ၏, 13 လေ့လာမှုများ (43%) ကြွက်သားခွန်အားကိုအနည်းဆုံး 1 အတိုင်းအတာတစ်ခုတိုးတက်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ [11, 18, 53, 81, 83, 84, 88, 93, 94, 101, 102, 104, 107ဒီလေ့လာမှုတွေ၏ 13 ၏] က Eleven4သို့မဟုတ်5တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအ 12 လေ့လာမှုများသုံးခု (4 သို့မဟုတ်5၏ Jadad ရမှတ်များနှင့်အတူအားလုံး) ကိုတိုင်းတာနည်းပါးလာထက် 25% အတွက်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ [11, 53, 81] HIV ပိုး, 11 လေ့လာမှု 24 မပါဘဲယောက်ျား၏လေ့လာမှုများ (45.8%) ခုနှစ်တွင်ကြွက်သားခွန်အားကိုအနည်းဆုံး 1 အတိုင်းအတာတစ်ခုတိုးတက်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ HIV ပိုး,2နှင့်အတူယောက်ျား၏လေ့လာမှုများအတွက် [101, 107]5လေ့လာမှုများ၏ကြွက်သားခွန်အားကိုအနည်းဆုံး 1 အတိုင်းအတာတစ်ခုတိုးတက်မှုအစီရင်ခံ;3အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်။ [41, 99, 103]
နှစ်ဆယ်လေးပါးလေ့လာမှုများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို Endpoints အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုရဲ့သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဤ၏,5function ကိုအနည်းဆုံး 1 အတိုင်းအတာတစ်ခုတိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [18, 22, 81, 83, 86] မက HIV လူနာများ၏2လေ့လာမှုများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုင်းတာတဲ့ function တစ်ခုတိုးတက်မှုပြသသည်။ [41, 100] သည်ဤလေ့လာမှုခြောက်4သို့မဟုတ်5တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ [18, 41, 81, 83, 86, 100]
အကျဉ်းချုပ်မှာတော့လေ့လာမှုအများစုတိုးမြှင့်ကြွက်သားထုထည်ပေမယ့်ကြွက်သားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသို့မဟုတ် function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပြသပါ။
3.4 Mood နှင့်အပြုအမူ
ခံစားချက်နှင့်အပြုအမူအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်လေးဆယ်ငါးယောက်လေ့လာမှုများအတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် စားပွဲတင် 4။ နှစ်ဆယ်ကိုးစိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်စိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်း, 16 မပါဘဲယောက်ျားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောဤလေ့လာမှု။
Mood နှင့်အပြုအမူအပေါ် testosterone ၏ဆိုးကျိုးများ။
ခံစားချက်နှင့်အပြုအမူအချို့မှာလေ့လာမှုများဟို Steroid တစ်မျိုးအလွဲသုံးစားမှုအလားအလာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဟို steroids အလွဲသုံးစားလုပ်ယောက်ျားရှိခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြ "Roid Rage ။ " ကျနော်တို့က Steroid တစ်မျိုးအလွဲသုံးစားမှုလေ့လာမှုများအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် testosterone ဟော်မုန်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အမျက်ဒေါသနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့, ကျူးကျော်များနှင့်အခြားစိတ်ကိုပြောင်းလဲအပေါ်လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုတို့တွင်အနည်းနည်းကိုက်ညီမှုရှိခဲ့သည်။
ငါးလေ့လာမှုတွေအမျက်ဒေါသ, ကျူးကျော်ခြင်းသို့မဟုတ်ရန်ငြိုးအတွက်ကုသမှု-ဆက်စပ်တိုးကဖော်ပြခဲ့သည်။ [67, 108-111] သာလျှင်နှစ်ခုကဤလေ့လာမှု4သို့မဟုတ်5တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ [108, 111] လေ့လာမှုတစ်ခု 3တစ် Jadad ရမှတ်နှင့်အတူ, အရေပြားမှလျှောက်ထားကြောင်း testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်ကုသမှု၏အဆုံးမှာမိမိစိတ်ဓါတ်များကိုဖော်ပြရန်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်ကရေးသားအခမဲ့-စာသားကိုအပိုဒ်၏2ဘွဲ့ကြိုတရားသူကြီးတွေအားဖြင့်အကဲဖြတ်အပေါ်အခြေခံပြီးရန်လိုမုန်းတီးမှုတိုးမြှင့်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီ။ ငါတို့သည်ဤအကဲဖြတ်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမသိရပါဘူး။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ (Jadad ရမှတ်3နှင့် 5) testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုပြီးနောက်စိုးရိမ်စိတ်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ [45, 112]
29 လေ့လာမှုဆယ်ခုနစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ, ဒါမှမဟုတ်ခံစားချက်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုမျှမသက်ရောက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ [22, 24, 38, 59, 63, 85, 104, 113-121] 17 လေ့လာမှုခုနစ်4သို့မဟုတ်5တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခံစားချက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသာတစ်ဦးပေါင်းစပ်ရမှတ်အစီရင်ခံခဲ့သည်ကြောင့်ဤလေ့လာမှုတစ်ခုမှာအကဲဖြတ်လို့မရပါ။ [38အဆိုပါ Gough နှင့် Heilbrun နာမဝိသေသနစစ်ဆေးမှုများစာရင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်] ဘွဲ့ကြိုတရားသူကြီးတွေအားဖြင့်ရန်လိုမုန်းတီးမှုအကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောလေ့လာမှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမရှိပြောင်းလဲမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  ဒီအုပ်စုထဲမှာနောက်ထပ်လေ့လာမှု testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်လ်ကိုအသုံးပြုပြီးသာမန်အထက် testosterone ဟော်မုန်းသွေးရည်ကြည်ပြင်းအား၏မြင့်ပိုက်ဆံပမာဏအနည်းငယ်ကိုကွာပေးရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းအကဲဖြတ်တဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းအပေါ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တစ်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။  CHF နှင့်အတူ Non-စိတ်ဓာတ်ယောက်ျားအတွက်တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကနေနှစ်ဦးအပိုဆောင်းလေ့လာမှုများ, ပု Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI) ရက်နေ့တွင် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုမပြခဲ့ပါဘူး [20, 27] သည်ဤလေ့လာချက်များ၏အစောပိုင်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့တဲ့တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးမဟုတ်ရင်ကောက်ချက်ချပေမယ့်။ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူ Non-စိတ်ဓာတ်ယောက်ျားတစ်ဦးလေ့လာမှုရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ် testosterone ဟော်မုန်း-ကုသအတွက် BDI အတွက်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။  လေ့လာမှုတစ်ခု testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်တဲ့အခါသက်ကြီးရွယ်အိုများစိတ်ကျရောဂါစကေးအတွက်ယုတ် 60% လျော့နည်းသွားရှိသည်ဖို့5နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့ Non-စိတ်ဓာတ်ယောက်ျားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  ဒီလေ့လာမှု 1 တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှု  testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုတွေကတော့ Testosterone ≤8.0 nm နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ဆေးရုံတော့ပူပန်စီးပွားပျက်ကပ်ရမှတ် (HADS) အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပေမယ့် 8.1-12 nm ၏ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူယောက်ျားအတွက် HADS ၏စိတ်ကျရောဂါအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်တိုးတက်လာသည်။ Malkin et al ။  100 တိုင်း2ပတ် BDI ရမှတ်တိုးတက် testosterone ဟော်မုန်း MG ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုက5တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ရောဂါ diagnoses နှင့်အတူ 3.4.2 အမျိုးသားများအတွက်
တကျိပ်နှစ်ပါးသောလေ့လာမှုများ (HIV ပိုးယောက်ျားအတွက် 3) စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် dysthymia (တစ်ခါတစ်ရံလည်း "အသေးစားစိတ်ကျရောဂါ" ခေါ်) ၏ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်အကဲဖြတ်, 1 လေ့လာမှု schizophrenia နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း၏အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း,2လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ခဲ့ကြသည် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းနှင့်အတူလူ။ schizophrenic ယောက်ျားအတွက်လေ့လာမှုဘာသာရပ်ပြီးသားသုံးပြီးခံခဲ့ရသမျှကုသမှုအပြင် testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဂျယ်လ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။  တစ်ဦးစံစကေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောလက္ခဏာရမှတ်များအတွက်တိုးတက်မှုများရှိသော်လည်း Schizophrenia များအတွက် Calgary စီးပွားပျက်ကပ်စကေးမပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာတစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်ကို-to-အားရစရာ (ITT) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုလေ့လာမှုပြီးစီးတဲ့သူဘာသာရပ်များအကြားတွင်မြင်ကြခဲ့ဓိပ်ပာ; သို့သော်လုံးဝအကြား Testosterone နဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကြားစိတ်ကျရောဂါရမှတ်မရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏။ သိမြင်မှုချို့ယွင်းသို့မဟုတ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (Jadad ရမှတ် 3) နဲ့ယောက်ျားနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်ကုသမှု, စိတ်ကျရောဂါ, အပြုအမူ, ဒါမှမဟုတ်အသက်တာ၏အရည်အသွေးကို (QoL) ၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [42, 124] စောင့်ရှောက်သူများ-အကဲဖြတ် QoL သည်ဤလေ့လာမှု 1 အတွက်တိုးတက်ခဲ့သည်။ 
testosterone ဟော်မုန်းမှစိတ်ကျရောဂါနှင့် dysthymia များ၏တုံ့ပြန်မှုရောထွေးနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ HIV အနှုတ်လူတို့တွင်, လေးခုလေ့လာမှုများ (4 သို့မဟုတ်5တစ် Jadad ရမှတ်နှင့်အတူအားလုံး) နှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏စိတ်ရောဂါရောဂါလွှတ်အောင်မြင်သူကိုဘာသာရပ်များ၏အချိုးအစားအတွက်စိတ်ကျရောဂါများအတွက်စံအမှတ်ပေးစနစ်များအတွက် testosterone ဟော်မုန်း-ဆက်စပ်တိုးတက်မှုပြသသည်။ [37, 51, 125, 126] လေးကတခြားလေ့လာမှုတွေ (2 သို့မဟုတ်4တစ် Jadad ရမှတ်နှင့်အတူ 5) ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် dysthymia မတိုးတက်မှုပြသသည်။ [36, 111, 127, 128] လေ့လာမှုတစ်ခု (Jadad4ဂိုးသွင်း) ကုသမှု3လအကြာမရှိတော့သိသာခဲ့ကြောင်းကုသမှု6လအကြာစိတ်ကျရောဂါနှင့် melancholia အတွက်ယာယီတိုးတက်မှုပြသသည်။ 
ဒါကြောင့် HIV ပိုးယောက်ျားစိတ်ကျရောဂါနှင့်နိုင်မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသောကြောင့် "hypogonadal"3လေ့လာမှုများစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် dysthymia နှင့်အတူ HIV ပိုးလူတို့အား testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်။ [35, 129, 130] လေ့လာမှုနှစ်ယောက် [4 တစ် Jadad ရမှတ်ခဲ့35, 130] နှငျ့တစျခုလေ့လာမှု3တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။  testosterone ကုသမှုစိတ်ကျရောဂါ၏အစီအမံအပေါ်ကိုက်ညီမှုသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်; အဆိုပါတိုးတက်မှုအလေးချိန်တိုးခြင်းဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ကြပြီနိုင်ပေမယ့်တဦးတည်းလေ့လာမှုတွင် HIV-ဆက်စပ်ပိန်နှင့်အတူယောက်ျားအတွက် Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI) တွင်တစ်ဦး 5.8-အမှတ်တိုးတက်မှုပြသသည်။  နောက်ထပ်လေ့လာမှုစကေးဟာလက်တွေ့ကို Global ရလဒ်ပြသမှု (CGI) တွင်စုစုပေါင်း HIV ပိုးယောက်ျားတစ်ဦး testosterone ဟော်မုန်း-ဆက်စပ်တိုးတက်မှုပြသသော်လည်းမယ့်စိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြားတွင်။  ဒီလေ့လာမှုလည်းစီးပွားပျက်ကပ်များအတွက် Hamilton က Rating စကေး (Ham-D ကို) ၏စုစုပေါင်းနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လက္ခဏာရမှတ်များအတွက်မထိခိုက်စေစကေးအတွက်တိုးတက်မှုပြပြီး, BDI ရမှတ်မရှိသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကနောက်ဆက်တွဲ, ပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှုရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် testosterone ဟော်မုန်းပေးထားသောယောက်ျားအတွက် Ham-D ကိုသို့မဟုတ် BDI ဖြင့်တိုင်းတာစိတ်ကျရောဂါ၏တုံ့ပြန်မှုမရှိခြားနားချက်ကိုပြတော်မူ၏။ 
စာရေးဆရာများကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ခက်ခဲခဲ့ကြသူအဖြေဆိုသူ putative လူမျိုးကွဲတွေနဲ့အများစုလေ့လာမှုများအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာရလဒ်များအရအိပ်ယာတုံ့ပြန်မှုနှင့် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခု idiosyncratic တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖို့စာပေထဲမှာရောထွေးတုံ့ပြန်မှုစွပ်စွဲ တစ်ဦး.[111, 127] အဆိုပါလေ့လာမှုများ, သို့သော်အနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှု, စံကုထုံးကိုခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်အသက်-အလယ်တန်းသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာယောက်ျားခဲ့သောလူတို့၏လူမျိုးကွဲအတွက်တသမတ်တည်းတုံ့ပြန်မှုမပြခဲ့ပါဘူး။ သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းပြင်းအား (နှစ်ဦးစလုံး5တစ် Jadad ရမှတ်နှင့်အတူ) ကုထုံးအပေါ်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်သောလေ့လာမှုများများတွင်စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် dysthymia ၏တုံ့ပြန်မှုတသမတ်တည်းသွေးရည်ကြည်ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။
သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်နှစ်ဆယ်နှစ်လေ့လာမှုများအတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် စားပွဲတင် 5။ တဆယ်ခုနစ်မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်းခြင်းမရှိဘဲယောက်ျားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်4သိမြင်မှုချို့ယွင်းနှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် testosterone ၏ဆိုးကျိုးများ။
ဆယ်ပါးလေ့လာမှုများကျန်းမာအမျိုးသားများတွင်သိမြင်မှု Endpoints အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုရဲ့သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ Spatial သိမှတ်ခံစားမှု / မှတ်ဉာဏ် [3 လေ့လာမှုများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်နှင့်အတူတိုးတက်ခံရဖို့အစီရင်ခံခဲ့သည်114, 131, 132]2လေ့လာမှုများအတွက်မပြောင်းလဲ [42, 133] နှင့် 1 လေ့လာမှုမှာဖြည့်စွက်အတူဆင်းရဲတဲ့။  1 လေ့လာမှုတိုးတက်လာသောအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အစီရင်ခံပေမယ့်  နှင့် 1 လေ့လာမှု [တိုးတက်လာသောနှုတ် fluency တွေ့ရှိခဲ့134] အများဆုံးကိုအခြားလေ့လာမှုများနှုတ် fluency, မှတ်ဉာဏ်, ဒါမှမဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းပေးထားကျန်းမာယောက်ျားအခြားသိမြင် Endpoints မတိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [42, 91, 120, 131, 133, 134, 136] အဘယ်သူမျှမတိုးတက်မှု5သို့မဟုတ်4တစ် Jadad ရမှတ်ခဲ့ပြသသောလေ့လာမှု7၏တိုးတက်မှုနှင့်4ပြ5လေ့လာမှုများနှစ်ယောက်။
hypogonadal အဖြစ်ဖော်ပြ 3.5.2 ယောက်ျား
အမျိုးမျိုးသတ်မှတ် Hypogonadal ယောက်ျား, [, testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်နံပါတ်အစီအစဉ်အပေါ်ဂဏန်း၏ပိုကောင်းနှုတ်သင်ယူမှုနှင့်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ရှိသည်ဖို့ 1 လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြ112] ပေမယ့်တူညီတဲ့ဒိုမိန်းပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်အခြားလေ့လာမှုမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်။  ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အားသာချက်ဖေါ်ပြခြင်းအဆိုပါလေ့လာမှုအနုတ်လက္ခဏာလေ့လာမှုနေ့စဉ် 200 မီလီဂရမ် patch ကိုအသုံးပြုခဲ့စဉ်5MG testosterone ဟော်မုန်း enanthate ထိုးသွင်း။ နောက်ထပ်ဆေးထိုးလေ့လာမှု hypogonadal ယောက်ျားအတွက်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်ဖြည့်စွက်၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  လေ့လာမှုတစ်ခု [က, ပြင်ဆင်ထားသော Mini ကို-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်စာမေးပွဲ (MMSE) ရက်နေ့တွင်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် dihydrotestosterone နှင့်အတူကုသမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောအားနည်းချက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်11] ပေမယ့်ဒေတာများကိုပြသကြသည်မဟုတ်နှင့် putative ခြားနားချက်အကဲဖြတ်လို့မရပါ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှု 12 လကြာ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုနှင့်အတူ visuospatial သိမှတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ် MMSE မတိုးတက်မှုပြသသည်။  အားလုံးလေ့လာမှုများ4သို့မဟုတ်5၏ Jadad ရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။
သိမြင်မှုချို့ယွင်းနှင့်အတူ 3.5.3 အမျိုးသားများအတွက်
သံသယသို့မဟုတ်ရောဂါအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းနှင့်အတူယောက်ျား၏ကုသမှု3အထက်တစ် Jadad ရမှတ်ခဲ့နှစ်ခုဖြစ်သောငါးလေ့လာမှုများ, အစီရင်ခံခဲ့သည်။ 1 ဆေးထိုးလေ့လာမှုအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအကဲဖြတ်စကေး-သိမှု Subscale (ADAS-Cog), [တခုတခုအပေါ်မှာတိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်138] testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်လ်ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားလေ့လာမှုတူညီသောတူရိယာအပေါ်သို့မဟုတ်အခြားသိမြင် function ကိုစမ်းသပ်မှုမသက်ရောက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  Spatial နှင့်နှုတ်မှတ်ဉာဏ်6လေ့လာမှုမှာ testosterone ဟော်မုန်း enanthate ၏ 1 အပတ်စဉ်ထိုးပြီးနောက်တိုးတက်ခဲ့ပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကုသမှုမရှိဘဲ 6-ရက်သတ္တပတ် washout ကာလအတွင်းဆက်လက်ရှိခဲ့ပါဘူး။  တစ်ဦးကစတုတ္ထလေ့လာမှု testosterone ဟော်မုန်းအပြုအမူအပေါ်ထိုးနေ့စဉ်လူနေမှု (ADLs) ၏လှုပ်ရှားမှုများ, ဒါမှမဟုတ်သိမှတ်ခံစားမှုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  အဆိုပါပဉ္စမလေ့လာမှု transdermal testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်သိမှတ်ခံစားမှု, ခံစားချက်, ဒါမှမဟုတ်အသက်တာ၏အရည်အသွေးအတိုင်းအတာအတွက်ကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 
ကိုက်ညီမှုရလဒ်များအတွက် 3.5.4 အဆိုပြုထားရှင်းလင်းချက်
လေ့လာမှုရလဒ်များသည်မတူညီကြခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိနေသောကြောင့်အချို့စာရေးဆရာများ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုတည်းသောအချက်သို့မဟုတ်သိမြင် function ကိုပင်အရေးအပါဆုံးအချက်တစ်ချက်မဟုတ်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ Janowsky et al  scrotal testosterone ဟော်မုန်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနဲ့ကုသယောက်ျားအတွက်တိုးတက်လာသော Spatial သိမှတ်ခံစားမှုကိုတွေ့ပေမယ့်ဒီစာရေးသူအခွင့်အလမ်းမှစွပ်စွဲထားတဲ့17β-estradiol ၏အခြေခံအသှေးကိုပြင်းအားအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအုပ်စုများအကြားတစ်ဦးမညီမမျှရှိ၏။ Spatial သိမှတ်ခံစားမှုစမ်းသပ်ခြင်းအပေါ် Testosterone နဲ့17β-estradiol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. စူးစမ်းခဲ့သည် Post-hoc စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Spatial သိမှတ်ခံစားမှုပေါ် putative testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်ထက် testosterone ဟော်မုန်း၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်17β-estradiol ၏ဖိနှိပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ထင်ရှား။ , ဒီလေ့လာမှုက3တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
17β-estradiol အတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအများစုမှာစာရေးဆရာများကထိရောက်မှုကိုပြသထားပါတယ်သည့်အခါ testosterone ဟော်မုန်း၏ထိရောက်မှု, 17β-estradiol မှ aromatization ကြောင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ Cherrier et al  ကျန်းမာအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏ဆေးထိုးပြီးနောက် Testosterone နဲ့17β-estradiol ပြင်းအားကိုတိုင်းနှင့် Testosterone နဲ့17β-estradiol နှစ်ဦးစလုံးပြင်းအားစမ်းသပ်ဇာတ်လမ်း၏ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြပေမယ်သာ17β-estradiol ပြင်းအားဟာ Stroop စမ်းသပ်မှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ အခြားလေ့လာမှုမှာတော့ Cherrier et al testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်ပြီးနောက်17β-estradiol အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးနှင့်အတူသာယောက်ျားနှုတ်မှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်တိုးတက်မှုများပြသသော။ [အစီရင်ခံတင်ပြ136] ဒီလေ့လာမှု testosterone ဟော်မုန်းဖို့အရည်အချင်းနှင့်ကြောင့်17β-estradiol မှဖြစ်အံ့သောငှါသူတို့အားသက်ရောက်မှုများအကြားခွဲခြားဖို့ aromatase inhibitor anastrozole ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ anastrozole မရှိဘဲနောက်ထပ်လေ့လာမှုနှုတ်မှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်ခြင်းအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာခန့်မှန်းဖြစ် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးပြီးနောက်17β-estradiol သွေးရည်ကြည်ပြင်းအားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  အားလုံးသုံးလေ့လာမှုများ5တစ် Jadad ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအစဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ထိုအသွေးပြင်းအားထိရောက်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးအတွင်းရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်သိမြင် function ကိုလေ့လာမှုများအတွက်ကိုက်ညီမှုရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒီအယူအဆအရ, Over-ဖြည့်စွက်အောက်မှာ-ဖြည့်စွက်ကဲ့သို့ထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Cherrier et al  testosterone ဟော်မုန်းသည် IM၊ ၀၊ ၅၀၊ ၁၀၀ သို့မဟုတ် ၃၀၀ မီလီဂရမ်တွင်အပတ်စဉ်နှင့်နှုတ်ဖြင့်ရော၊ Spatial memory ကိုပါစစ်ဆေးသည်။ ရလဒ်အုပ်စုကိုကုသမှုအုပ်စုအရသိရသည်အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်မဟုတ်, အစား, ဘာသာရပ်များအခြေခံကျော်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းပြင်းအားအတွက်အဘယ်သူမျှမ, အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောတိုးနှင့်အတူခွဲခြားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများကိုထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်မှုကိုအထက်စံသွေဖီ0နှင့် 50 မီလီဂရမ်မှတုံ့ပြန်မှုအထက် 100 စံသွေဖည်အပေါ်အခြေခံပြီးသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ (300-1 nM အဖြစ်သတ်မှတ်) အခြေခံကျော်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုအလယ်အလတ်တိုးနှင့်အတူဘာသာရပ်များ "မတိုး" (1-100 nM) သို့မဟုတ်ကြီးမားသောတိုး (> 11 nM) နှင့်အတူရှိသူများထက်သိမြင်မှုစမ်းသပ်ခြင်းအပေါ်ပိုကောင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလယ်အလတ်တိုးပွားလာတဲ့အဖွဲ့ထဲကအမျိုးသား ၂၂ ယောက်ထဲက ၁၇ ယောက်ဟာ testosterone ဟော်မုန်း ၁၀၀ မီလီဂရမ် / တစ်ပတ်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ စာရေးသူများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့သည် tertile သို့မဟုတ် quartile များကိုမသုံးခဲ့ကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် quartile သို့မဟုတ် tertile များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရလဒ်များအရအခြေခံအားဖြင့်အပြောင်းအလဲများသောရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီလူနာများကြောင့်ရလဒ်များအရ၊ testosterone ဟော်မုန်းကိုသောက်သူအမျိုးသားများ။ ဒီလေ့လာမှုက Jadad အမှတ် ၅ ရတယ်။
အကျဉ်းချုပ်မှာတော့သာမန်သို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းယောက်ျားအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရန် testosterone ဟော်မုန်း၏အသုံးပြုမှုကိုမထောက်ခံကြောင်းလည်းမရှိ။
ဤသည်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါသို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ကြွက်သားခွန်အားစိတ်ဓါတ်များနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏အစားထိုးဘို့ testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ RCTs ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ဝေလေ့လာမှုများနှင့်ဧပြီလ 9, 2016 မတိုင်မီရည်ညွှန်းစမ်းသပ်မှုတွေကန့်သတ်ခဲ့သည်။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတားဆီးသို့မဟုတ်ကုသမှုအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏အသုံးပြုမှုကိုထောက်ပံ့အထောက်အထားကိုက်ညီမှုနှင့်ချိန်ခွင်လျှာပေါ်တွင် unconvincing ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကသက်သေအထောက်အထား ST-segment ကိုစိတ်ကျရောဂါဖို့အချိန်တိုးမြှင့်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးတစ်ခုစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုထောက်ခံနှင့်ပိတ်ဆို့မှုကိုနှလုံးပျက်ကွက်အချို့အစီအမံများတွင်တိုးတက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အများစုမှာလေ့လာမှုများရောင်ရမ်းအမှတ်အသားများအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံး၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်နှင့် lipids အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုက်ညီမှုရှိကြ၏။
လက်တွေ့သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ကြောင်းလေ့လာရေးရလဒ်များအရအိပ်ယာကျော် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးမျက်နှာသာကြပြီမဟုတ်။ angina အကဲဖြတ်ကြောင်း3လေ့လာမှုများနှစျယောကျအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်။ တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကနေသုံးလေ့လာမှုများ CHF နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက်အကျိုးရှိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအတွက်အစောပိုင်းရပ်တန့်ခဲ့သည်။
testosterone ဖြည့်စွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးတက်အောင်တသမတ်တည်းထိရောက်မှုကိုသရုပ်ပြခဲ့ပါဘူး။ testosterone ED ကုသထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အနုတ်လက္ခဏာလေ့လာမှုများထက်ပိုပြီးအပြုသဘောနှင့်အတူထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေ, လိင်စိတ်အပေါ်ရောနှောခဲ့ကြသည်။
သိသိသာသာအထောက်အထားတွင် HIV နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးကျန်းမာယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားအတွက်ကြွက်သားထုထည်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုတစ်ခုအဆင်သင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို support နှင့်လေ့လာမှုများတစ်အများစုအဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းပြသခဲ့သည်။ testosterone ကြွက်သားခွန်အားအရှိဆုံးအစီအမံမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ခြို့တဲ့လျော့ကျလာခြင်းနှင့်အသက်ကြီးသူများအတွက်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်အကျိုးရှိသောဖြစ်စေခြင်းငှါနေစဉ်, testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်အသက်ကြီးအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မထားဘူး။
ခံစားချက်-related Endpoints အပေါ်အများစုကလေ့လာမှုများကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ, ဒါမှမဟုတ်ခံစားချက်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုမျှမအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။2လေ့လာမှုများစိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းသွားပြသသော်လည်း, စိတ်ကျရောဂါကုသရောထွေးနှင့်ကိုက်ညီမှုရလဒ်များကိုပြသသည်။ testosterone ဟော်မုန်းအကျိုးအတွက်စိတ်ဓါတ်များလုပ်ခဲ့တယ်ရင်တောင်, လူမှုရေးဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များကိုမှီအောင်လိုက်စေခြင်းငှါ,;5လေ့လာမှုများအမျက်ဒေါသ, ကျူးကျော်ခြင်းသို့မဟုတ်ရန်ငြိုးအတွက်ကုသမှု-related တိုးမှတ်ချက်ချသည်။ testosterone သိမြင်မှုချို့ယွင်းသို့မဟုတ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတှကျအကြိုးမပေးဘဲ, မကနှုတ် fluency, မှတ်ဉာဏ်, ဒါမှမဟုတ်သာမန်ယောက်ျားအခြားသိမြင် Endpoints အကြိုးခံစားခဲ့ပါဘူး။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, RCTs ထံမှသက်သေအထောက်အထားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ခံစားချက်, ဒါမှမဟုတ်အခြားသောကောင်းကျိုးကိုတိုးတက်အောင်လို့ခေါ် Low-T ရဲ့ကုသမှုကိုထောက်ပံ့မပေးပါဘူး။ testosterone ကြွက်သားထုထည်တိုးပွါး, ဒါပေမယ့်မရတန်ခိုးတော်ကို၎င်း, အချို့တိုးတက်မှုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချို့ကိုအငှားအမှတ်အသားများတွင်တွေ့မြင်နေ, လက်တွေ့အကျိုးအနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအကြားအသင်းအဖွဲ့အပေါ်ကွဲလွဲသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ RCTs testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးနှင့်အတူတိုးပွားလာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ အထူးသနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်း Endpoints ဘာလို့လဲဆိုတော့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်များ၏အစောပိုင်းရပ်တန့်ခဲ့သည်ကိုလေ့လာတစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောရုံးတင်စစ်ဆေး။  2994 အတွက် 27 ယောက်ျား၏ Meta-analysis သည် 2012 မှတဆင့်ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေ randomized testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ (OR, 1.54; 95% CI, 1.09-2.18) ၏အန္တရာယ်တိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ 
testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်စူးစမ်းလေ့လာမှုများအန္တရာယ်အပေါ်ကွဲလွဲရလဒ်များကိုပြသခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကစစ်ပြန်အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုသွေးကြောဆိုင်ရာ angiography ခံခြင်းနှင့် 300 ng / dl (10.4 nm) ထက်လျော့နည်းစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှု (ယူဆရပလာစမာ) ခဲ့ကြသောယောက်ျားအကဲဖြတ်။  testosterone ဟော်မုန်းနဲ့ကုသနေသောအမျိုးသားများ testosterone ဟော်မုန်းကိုမသုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးတိုးလာ All-အကြောင်းမရှိသေဆုံးမှု, MI ၏အန္တရာယ်နှင့်လေဖြတ်ခြင်းရှိခဲ့ (HR, 1.29; 95% CI, 1.05-1.58), 27.5 လအတွင်းတစ်အတောအတွင်းအပေါ်အခြေခံပြီး ၏နောက်ဆက်တွဲ။ စစ်ပြန်အုပ်ချုပ်ရေး data တွေကိုသုံးပြီးနောက်ထပ်နောက်ကြောင်းပြန်ဆောင်များတွင်လေ့လာမှု All-အကြောင်းမရှိသေဆုံးမှု, myocardial infarction နှင့်သူ၏ testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုကုသမှုပြီးနောက် "ပုံမှန်" testosterone ဟော်မုန်း-ကုသလူတို့တွင်လေဖြတ်တဲ့အနိမ့်မှုနှုန်းပြသခဲ့သည်။  ကြီးမားတဲ့, ဘက်ပေါင်းစုံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းယောက်ျား၏နောက်ထပ်စူးစမ်းလေ့လာမှုသေဆုံးမှုနှုန်း3နှစ်အတွင်းလျှော့ချခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် myocardial infarction သို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းမသက်ရောက်ရှိ၏။ 
တစ်ဦးက Medicare-based လေ့လာမှုဂိုးသွင်းနှင့်မျှမတိုးချဲ့အန္တရာယ်တွေ့ရှိခဲ့တောင်းဆိုမှုများ data တွေကိုသုံးပြီး testosterone ဟော်မုန်းထိတွေ့မှုနှင့် MI ရလဒ်များဖော်ထုတ်နှင့်ကိုက်ညီတစ်ခုမျက်မြင်လက်တွေ့ဆင်းသက်လာ propensity သုံးပြီးတည်းကကုသမှုမရှိဘူးဘာသာရပ်များနှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်း-ကုသ။  testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးအဘို့ပြုပြင် HR နှင့် MI 0.84 (95% CI 0.69-1.02) ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမြင့်ဆုံး quartile propensity ရမှတ်အကွာအဝေးအတွင်းဘာသာရပ်များ၏ analysis 0.69 (95% CI 0.53-0.92) ၏ HR အတူ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုတစ်ခုအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြုသည်။ အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်စူးစမ်းလေ့လာမှုကုသမှုလျှော့သေဆုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ;  ဆီးချိုရောဂါအတွက်အခြား  All-အကြောင်းမရှိသေဆုံးမှုပေမယ့်ဒီထက်ထက်တစ်နှစ် testosterone ဟော်မုန်းကိုလက်ခံရရှိနှင့်ခြောက်လမတိုင်မီဖြစ်ပေါ်သေဆုံးမှုဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သောဖယ်ထုတ်လိုက်ယောက်ျားအပေါ်အကျိုးကျေးဇူးကဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦးကကြီးမားသောဆောင်များတွင်လေ့လာမှု myocardial infarction နှုန်းထားများသိသိသာသာ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုစတင်သုံးလအတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိရ; 65 ကျော် testosterone ဟော်မုန်း-ကုသယောက်ျား testosterone ဟော်မုန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ဆ myocardial infarctions နှုန်းခံစားခဲ့ရသညျ။ 
, အဝလွန်ဆီးချို, သွေးတိုး, ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်နေမကောင်းနေသောယောက်ျား testosterone ဟော်မုန်း၏အနိမ့်ပလာစမာပြင်းအားရှိသည်ကြောင့် testosterone ကုသမှုရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်စဉ်းစားထားသည်။  သို့သော်လည်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၏ညှနျကွားမသိရသေးဖြစ်၏ ဒါကြောင့်အဝလွန်သို့မဟုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်နာတာရှည်ရောဂါအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းထက်နိမ့် testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုမရှိခြင်းရောဂါဖြစ်စေတဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါဟာအခြားယန္တရား testosterone ဟော်မုန်းပြင်းအားကိုလျော့နည်းစေတယ်လေနှင့်အချို့သောရောဂါများအန္တရာယ်တိုးပွါးနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းမှအပြုသဘောကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ attributing စူးစမ်းလေ့လာမှုများမဟုတ်ဘဲ testosterone ဟော်မုန်းတိုးတက်အောင်ကျန်းမာရေးထက် testosterone ဟော်မုန်းသတ်မှတ်ထားသောခံရကျန်းမာသန်ယောက်ျားတစ်ဦးတိုးလာဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
testosterone ဟော်မုန်း၏နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်သွေးဆုံးဟော်မုန်းကုထုံးများ၏ထောက်ခံချက်အကြားမျဉ်းပြိုင်ရှိပါတယ်။ စူးစမ်းလေ့လာမှုများသွေးဆုံးဟော်မုန်းကိုယူသောမိန်းမတို့ကိုမသောမိန်းမတို့သည်ထက်လျော့နည်းနှလုံးရောဂါရှိတယ်ဆိုတာပြသသောကွောငျ့ Physicians နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကာကွယ်တားဆီးဖို့အမျိုးသမီးတွေကို menopausal မှအီစရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်-progestin ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသတ်မှတ်ထားသော။ RCTs သို့သော်သွေးဆုံးဟော်မုန်းကုထုံးနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လေဖြတ်ခြင်း၏အန္တရာယ်တိုးလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ [150-153] ဒါကြောင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းအမျိုးသမီးတွေသွေးဆုံးဟော်မုန်းကုထုံးယူဖို့ရွေးချယ်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သွေးဆုံးဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေးကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါဘူး။
2012 များတွင် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးများအတွက်ရောင်းအား $2ဘီလီယံကိုကျော်လွန်သွားနှင့်အရောင်းနိုင်ငံပေါင်းများစွာအတွက်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်။  testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်အသုံးပြုမှုအတွက်ဒီတိုးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်မျှော်လင့်တိုးတက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ, ခံစားချက်, ဒါမှမဟုတ်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်အခြေခံကြောင်းအတိုင်းအတာစေရန်, ကျနော်တို့ကလုံလောက်တဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုထောက်ခံမှုမပါဘဲကုထုံးကိုယ်စားပြုအံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ testosterone ဟော်မုန်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများင်း၏အန္တရာယ်ထင်ရှားသောအဘယ်သူကိုများအတွက်သာမန်ယောက်ျားမရှိသည့်လူဦးရေဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးနှင့်သာမန်ယောက်ျားအတွက်လက်တွေ့အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အထောက်အထားမရှိခြင်း၏လူသိများသည့်အန္တရာယ်ပေးသောကျနော်တို့ testosterone ဟော်မုန်း၏နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်ထင်ကြပါဘူး။
ကျနော်တို့ကဒီစာရွက်၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်၎င်းတို့၏သုတေသနအကူအညီအတွက်မဿဲ Puretz, Anastassia Reznik နှင့်နီကိုးလ် Dubowitz ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုအဘို့အဘယ်သူမျှမရန်ပုံငွေသတင်းရပ်ကွက်များရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Scialli Scialli အတိုင်ပင်ခံ LLC အတွက်တစ်ဦးတည်းသောပါဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။ Scialli အတိုင်ပင်ခံ LLC အဘယ်သူမျှမန်ထမ်းရှိပြီးလစာသို့မဟုတ်အခြားရန်ပုံငွေဖြစ်စေနှင့်အတူဤလေ့လာမှုကိုထောကျပံ့မပေးခဲ့ပါဘူး။ Scialli အတိုင်ပင်ခံ LLC လေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်မဆိုအခန်းကဏ္ဍရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီစာရေးဆရာများ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍကို 'စာရေးဆရာပံ့ပိုးမှုများကို' 'အပိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ Malkin CJ, Pugh PJ, မောရစ် PD, ကယ်ရီ Ke, ဂျုံးစ် RD, ဂျုံးစ် TH, et al ။ angina နှင့်အတူ hypogonadal အမျိုးသားများတွင် testosterone အစားထိုးအသက်တာ၏ ischemic တံခါးခုံနှင့်အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ နှလုံး။ 2004; 90 (8): 871-6 ။ Doi: 10.1136 / hrt.2003.021121 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC1768369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2 ။ ဝက်ဘ်က CM, Adamson DL, က de Zeigler D ကိုစူးရှသော testosterone ဟော်မုန်း၏ Collins P. Effect သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် myocardial ischemia ပေါ်မှာ။ နံနက် J ကို Cardiol ။ 1999; 83 (3): 437-9 ။ [PubMed]
3 ။ ဝက်ဘ်က CM, Elkington AG က, Kraidly MM, Keenan N ကို, Pennell DJ သမား, အနိမ့် plasma Testosterone နဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် myocardial perfusion နှင့်သွေးကြော function ကိုအပေါ်ပါးစပ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု Collins P. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက် J ကို Cardiol ။ 2008; 101 (5): 618-24 ။ Doi: 10.1016 / j.amjcard.2007.09.114 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC2258313 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Mathur တစ်ဦးက, Malkin ကို C, Saeed B, Muthusamy R ကို, ဂျုံးစ် TH, ယောက်ျားအတွက် angina တံခါးခုံနှင့် atheroma အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး၏ Channer K. long-term အကြိုးခံစားခှငျ့။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2009; 161 (3): 443-9 ။ Doi: 10.1530 / EJE-09-0092 ။ [PubMed]
5 ။ Kenny လေး, Prestwood KM, Gruman, CA, ဖာဘရီဂက်စ်, G, Biskup B က, အနိမ့် bioavailable testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသက်ကြီးအတွက် lipids နှင့်သွေးကြော reactivity ကိုအပေါ် transdermal testosterone ဟော်မုန်း၏ Mansoor G. အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Gerontol တစ်ဦးက Biol သိပ္ပံ Med သိပ္ပံ။ 2002; 57 (7): M460-5 ။ [PubMed]
6 ။ Basaria S က, et al Harman သည် SM, Travison TG, Hodis H ကို, Tsitouras P ကို, Budoff M က။ အနိမျ့သို့မဟုတ် Low-ပုံမှန် testosterone Levels နဲ့အတူအသက်ကြီးအမျိုးသားများအတွက် Subclinical သွေးကြောတိုးတက်မှုအပေါ်3နှစ်များအတွက် testosterone အုပ်ချုပ်ရေး၏ဆိုးကျိုးများ: ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2015; 314 (6): 570-81 ။ Doi: 10.1001 / jama.2015.8881 ။ [PubMed]
7 ။ ဝူ SZ, Weng XZ ။ 62 သက်ကြီးရွယ်အိုများအထီးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဝေဒနာရှင်အတွက် myocardial ischemia နှင့်နှလုံး function ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအန်ဒရိုဂျင်ပြင်ဆင်မှု၏ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ချင်းပြည်နယ် Med J ကို (Engl) ။ 1993; 106 (6): 415-8 ။ [PubMed]
8 ။ Thompson က PD, Ahlberg AW, Moyna မိုင်, Duncan က B, Ferraro-Borgida M က, White, CM, et al ။ သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် myocardial ischemia အပေါ်သွေးကြောသွင်း testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက်နှလုံးဂျေ 2002; 143 (2): 249-56 ။ Doi: 10.1067 / mhj.2002.120144 [PubMed]
9 ။ Ong က PJ, Patrizi, G, Chong WC, ဝက်ဘ်က CM, Hayward CS, Ciollins P. testosterone သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်စီးဆင်းမှု-mediated brachial သွေးလွှတ်ကြော reactivity ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ နံနက် J ကို Cardiol ။ 2000; 85 (2): 269-72 ။ [PubMed]
10 ။ Kang သည် SM, ဂျန် Y ကိုကင်မ်ဂျီ, Chung N ကို, ချို SY, Chae JS, et al ။ သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် brachial သည်သွေးလွှတ်ကြော vasoreactivity အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေး effect ။ နံနက် J ကို Cardiol ။ 2002; 89 (7): 862-4 ။ [PubMed]
11 ။ Ly LP သို့ Jimenez M က, Zhuang TN, Celermajer DS, Conway AJ, Handelsman DJ သမား။ ကြွက်သားခွန်အား mobility နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့နှင့်အတူအသက်ကြီးဘဝအရည်အသွေးပေါ် transdermal dihydrotestosterone ဂျယ်လ်တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2001; 86 (9): 4078-88 ။ [PubMed]
12 ။ Rosano GMC, လီယိုနာဒိုက F, Pagnotta P ကို, Pelliccia က F, Panina, G, Cerquetani အီး, et al ။ သွေးကြောဆိုင်ရာအခြေအနေမှာအကြမ်းဖျင်းရောဂါနဲ့အတူအမျိုးသားများအတွက် testosterone ၏ acute Anti-Ischemic Effect ။ စောင်ရေ။ 1999; 99 (13): 1666-70 ။ Doi: 10.1161 / 01.cir.99.13.1666 [PubMed]
13 ။ Dohn K ကို Hvidt V ကို, Nielsen J ကို, အောက်ပိုင်းခြေလက်အင်္ဂါများတွင်သွေးလွှတ်ကြောကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဖျက်စီးပစ်ခဲ့ပြီးအတွက်အုန်းအယ်လ် testosterone ကုထုံး။ Angiology ။ 1968; 19 (6): 342-50 ။ [PubMed]
14 ။ Jaffe က MD ။ postexercise ST အစိတ်အပိုင်းစိတ်ကျရောဂါအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း cypionate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ br နှလုံးဂျေ 1977; 39 (11): 1217-22 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Cornoldi တစ်ဦးက, Caminiti, G, Marazzi, G, အလှနျအရေးကွီးကို C, et al Patrizi R ကို, Volterrani M က။ သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါနှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုများအထီးဆီးချိုလူနာအတွက် myocardial ischemia, lipid ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်အင်ဆူလင်ကိုခုခံအပေါ်နာတာရှည် testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ int J ကို Cardiol ။ 2010; 142 (1): 50-5 ။ Doi: 10.1016 / j.ijcard.2008.12.107 ။ [PubMed]
16 ။ အင်္ဂလိပ် KM, မြင်း RP, ဂျုံးစ် TH, ရေငုပ်သမား MJ, Channer KS ။ ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု: low-ထိုး transdermal testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးနာတာရှည်တည်ငြိမ် angina နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် angina တံခါးခုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ စောင်ရေ။ 2000; 102 (16): 1906-11 ။ [PubMed]
17 ။ Basaria S က, Coviello အေဒီ, Travison TG, et al Storer TW, Farwell WR, Jette လေး။ testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ။ N ကို Engl J ကို Med ။ 2010; 363 (2): 109-22 ။ Doi: 10.1056 / NEJMoa1000485 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ Caminiti, G, Volterrani M က, Iellamo က F, Marazzi, G, Massaro R ကို, ကြွက်က M, et al ။ အလုပ်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းရည်, အရိုးကြွက်သားစွမ်းဆောင်ရည်, အင်ဆူလင်ကိုခုခံခြင်း, နာတာရှည်နှလုံးပျက်ကွက်တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, ကျပန်းလေ့လာမှုနှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာ baroreflex sensitivity ကိုတာရှည်-သရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု effect ။ J ကို Am Coll Cardiol ။ 2009; 54 (10): 919-27 ။ [PubMed]
19 ။ နာတာရှည်နှလုံးပျက်ကွက်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း၏ Pugh P. ထူးခြားသော haemodynamic ဆိုးကျိုးများ။ EUR နှလုံးဂျေ 2003; 24 (10): 909-15 ။ Doi: 10.1016/s0195-668x(03)00083-6 [PubMed]
20 ။ Pugh PJ ။ နာတာရှည်နှလုံးပျက်ကွက်နှင့်အတူယောက်ျားတို့အတွက် testosterone ကုသမှု။ နှလုံး။ 2004; 90 (4): 446-7 ။ Doi: 10.1136 / hrt.2003.014639 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Pugh PJ, ဂျုံးစ် RD, Malkin CJ, ခန်းမ J ကို, Nettleship je, ကယ်ရီ Ke, et al ။ ဇီဝကမ္မ testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးနာတာရှည်နှလုံးပျက်ကွက်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်အကျိတ် necrosis အချက်-alpha-၏သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပါတယ်။ endocrine သုတေသန။ 2005; 31 (4): 271-83 ။ Doi: 10.1080 / 07435800500406205 [PubMed]
22 ။ Mirdamadi တစ်ဦးက, Garakyaraghi M က, Pourmoghaddas တစ်ဦးက, Bahmani တစ်ဦးက, Mahmoudi H ကို, အလုပ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်, နှလုံးသွေးကြော parameters တွေကိုနှင့်ပိတ်ဆို့မှုကိုနှလုံးပျက်ကွက်နှင့်အတူလူနာအသက်တာ၏အရည်အသွေးအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံး၏ Gharipour အမ်ကြိုးသက်ရောက်မှု။ Biomed Res Int ။ 2014; 2014: 392432 Doi: 10.1155 / 2014 / 392432 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC4109421 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Malkin CJ, Pugh PJ အနောက်ဖြစ်မှု, ဗန် Beek EJ, ဂျုံးစ် TH, Channer KS ။ အလယ်အလတ်ပြင်းထန်မှုနှလုံးပျက်ကွက်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ကုထုံး: ရုံးတင်စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကို double-မျက်စိကန်းသောကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ။ EUR နှလုံးဂျေ 2006; 27 (1): 57-64 ။ Doi: 10.1093 / eurheartj / ehi443 ။ [PubMed]
24 ။ Howell SJ, Radford ဂျာအဒမ် je, Smets EM, Warburton R ကို, Shalet သည် SM ။ cytotoxic ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုအောက်ပါပျော့ Leydig ဆဲလ်မလုံလောက်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ Clin Endocrinol (Oxf) ။ 2001; 55 (3): 315-24 ။ [PubMed]
25 ။ et al Jockenhövelက F, Bullmann ကို C, Schubert M က, Vogel အီး, Reinhardt W က, Reinwein: D ။ hypogonadal အမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည် lipids နှင့်လစ်ပိုပရိုတိန်းအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်အစားထိုးအမျိုးမျိုး Modes သာ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဇီဝြဖစ်။ 1999; 48 (5): 590-6 ။ [PubMed]
26 ။ ဂျုံးစ် TH, Arver S က, Behre HM, Buvat J ကို, Meuleman အီး, Moncada ငါ et al ။ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ (ထို TIMES2 လေ့လာမှု) နဲ့ hypogonadal အမျိုးသားများတွင် testosterone အစားထိုး။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2011; 34 (4): 828-37 ။ Doi: 10.2337 / dc10-1233 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Malkin CJ, Pugh PJ, ဂျုံးစ် RD, Kapoor က D:, Channer KS, ဂျုံးစ် TH ။ hypogonadal ယောက်ျားအတွက် endogenous ရောင်ရမ်း cytokines နှင့် lipid profile များကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2004; 89 (7): 3313-8 ။ Doi: 10.1210 / jc.2003-031069 ။ [PubMed]
28 ။ Guler N ကို, Batyraliev T က, Dulger H ကို, Ozkara ကို C, Tuncer M က, Aslan S က, et al ။ တိုတောင်းသောသက်တမ်း၏ဆိုးကျိုးများ (3 ရက်သတ္တပတ်) သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြော stenting လျှက်ယောက်ျားအတွက်သွေးရည်ကြည်ရောင်ရမ်းအမှတ်အသားများအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု။ int J ကို Cardiol ။ 2006; 109 (3): 339-43 ။ Doi: 10.1016 / j.ijcard.2005.06.027 ။ [PubMed]
29 ။ HR, ဗန် der Schouw YT Grobbee DE, Emmelot-Vonk MH, bot တွေကို ML, Verhaar HJ, Nakhai-လောင်း။ ခံတွင်း testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားများတွင်နာတာရှည်အနိမ့်တန်းရောင်ရမ်း: တစ် 26-အပတ်ကရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ နံနက်နှလုံးဂျေ 2007; 154 (6): 1228 e1-7 ။ Doi: 10.1016 / j.ahj.2007.09.001 ။ [PubMed]
30 ။ ဖရက်ဒရစ်, L, Glintborg: D, Hojlund K ကို Hougaard DM, Brixen K ကို Rasmussen LM, et al ။ Osteoprotegerin အဆင့်ဆင့်အိုမင်းအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးကာလအတွင်းလျော့ချနှင့်ဒေသတွင်းအဆီပြောင်းလဲဖြန့်ဖြူးနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ Horm Metab Res ။ 2013; 45 (4): 308-13 ။ Doi: 10.1055 / s ကို-0032-1323647 ။ [PubMed]
31 ။ Kapoor က D:, Clarke က S, Stanworth R ကို, Channer KS, ဂျုံးစ် TH ။ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားအတွက် adipocytokines နှင့် C-reactive protein အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2007; 156 (5): 595-602 ။ Doi: 10.1530 / EJE-06-0737 ။ [PubMed]
32 ။ Gianatti EJ, Dupuis P ကို, Hoermann R ကို, Strauss BJ, Wentworth JM, Zajac JD, et al ။ တစ်ဦး randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး: type ကို2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု effect ။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2014; 37 (8): 2098-107 ။ [PubMed]
33 ။ Ng သည် MKC ။ အမျိုးသားများအတွက်အတွက် Serum ရောင်ရမ်းညွှန်မှတ်အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏အလားအလာလေ့လာပါ။ Arterioscler Thromb Vasc Biol ။ 2002; 22 (7): 1136-41 ။ Doi: 10.1161 / 01.atv.0000022167.80130.a6 [PubMed]
34 ။ Smith ကလေး, အင်္ဂလိပ် KM, Malkin CJ, ဂျုံးစ် RD, ဂျုံးစ် TH, Channer KS ။ testosterone ဆိုးရွားစွာနာတာရှည်တည်ငြိမ် angina နှင့်အတူ 1 ယောက်ျားအတွက် fibrinogen သို့မဟုတ်တစ်သျှူးများ plasminogen Active (ဘိလပ်မြေ) နှင့် plasminogen Active inhibitor-1 (Pai-46) အဆင့်ဆင့်ကိုထိခိုက်ပါဘူး။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2005; 152 (2): 285-91 ။ Doi: 10.1530 / eje.1.01848 ။ [PubMed]
35 ။ Rabkin JG, Wagner GJ, Rabkin R. hypogonadal လက္ခဏာတွေနဲ့အတူ HIV ပိုးယောက်ျားတို့အတွက် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံး၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 57 (2): 141-7 ။ [PubMed]
36 ။ Seidman SN, Spatz အီး, Rizzo ကို C, Roose SP ။ ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု: အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားတို့အတွက် testosterone အစားထိုးကုထုံး။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 62 (6): 406-12 ။ [PubMed]
37 ။ Amiaz R ကိုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG ဂျူနီယာမန်း T က, ကယ်လီ JF, နန်ကို BP, Kanayama, G, et al ။ ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု: testosterone ဂျယ်လ်ကိုအစားထိုး serotonergic စိတ်မကျဆေး Antidepressants ယူပြီးစိတ်ဓာတ်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2011; 37 (4): 243-54 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2011.582425 ။ [PubMed]
38 ။ Brockenbrough ကို AT, Dittrich MO ကို, စာမျက်နှာ ST, စမစ် T က, Stivelman JC, Bremner WJ ။ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာရောဂါသွေးအားနည်းရောဂါ၏ကုသမှုအတွက် EPO တိုးပွားဖို့ Transdermal အန်ဒရိုဂျင်ကုထုံး။ နံနက် J ကိုကျောက်ကပ် dis ။ 2006; 47 (2): 251-62 ။ Doi: 10.1053 / j.ajkd.2005.10.022 ။ [PubMed]
39 ။ Gluud ကို C, Wantzin P ကို, Eriksen J ကို, အသည်းရောဂါများအတွက်ကိုပင်ဟေဂင်လေ့လာမှု Group မှ။ အရက် cirrhotic အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်ပါးစပ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ Gastroenterology ။ 1988; 95 (6): 1582-7 ။ [PubMed]
40 ။ Hentzer အီး, Madsen PC ကို။ အောက်ပိုင်းခြေလက်အင်္ဂါများသည်သွေးလွှတ်ကြောမလုံလောက်၏ကုသမှုအတွက် testosterone ။ Scand J ကို Clin Lab မှ Invest ။ 1967; 99: 198-206 ။ [PubMed]
41 ။ Knapp PE, Storer TW, Herbst KL, Singh က AB, Dzekov ကို C, Dzekov J ကို, et al ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, ကြွက်သားစွမ်းဆောင်ရည်, ခံစားချက်, နှင့် HIV-ဆက်စပ်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူလူပင်ပန်းအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခု supraphysiological ထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Physiol Endocrinol Metab ဖြစ်၏။ 2008; 294 (6): E1135-43 ။ Doi: 10.1152 / ajpendo.90213.2008 ။ [PubMed]
42 ။ lu PH သည်, Masterman DA, Mulnard R ကို, Cotman ကို C, Miller က B, Yaffe K သည်, et al ။ ပျော့အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်ကျန်းမာသက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားနှင့်အတူအထီးလူနာအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ခံစားချက်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ Arch Neurol ။ 2006; 63 (2): 177-85 ။ [PubMed]
43 ။ Svartberg J ကို, Aasebøဦး, Hjalmarsen တစ်ဦးက, Sundsfjord J ကို, Jorde R. testosterone ကုသမှုတစ်ခု6လအတွက် COPD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2004; 98 (9): 906-13 ။ Doi: 10.1016 / j.rmed.2004.02.015 [PubMed]
44 ။ Davidson JM, Camargo, CA, Smith က ER ။ hypogonadal အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1979; 48 (6): 955-8 ။ [PubMed]
45 ။ Skakkebaek NE, Bancroft J ကို, Davidson DW, hypogonadal အမျိုးသားများတွင်ပါးစပ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate နှင့်အတူဖြစ်တဲ့ Warner P. အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုး: လေ့လာမှုထိန်းချုပ်ထားနှစ်ဆမျက်စိကန်း။ Clin Endocrinol (Oxf) ။ 1981; 14 (1): 49-61 ။ [PubMed]
46 ။ Nankin HR, လင်း T က, အလယ်တန်းခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် Osterman ဂျေနာတာရှည် testosterone ဟော်မုန်း cypionate ကုထုံး။ ဓာတ်မြေသြဇာမြုံ။ 1986; 46 (2): 300-7 ။ [PubMed]
47 ။ Aversa တစ်ဦးက, Isidori လေး, Spera, G, Lenzi တစ်ဦးက, Fabbri ဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့အေအန်ဒရိုဂျင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက် sildenafil မှလိုဏ်ဂူ vasodilation နှင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ Clin Endocrinol (Oxf) ။ 2003; 58 (5): 632-8 ။ [PubMed]
48 ။ Cavallini, G, Caracciolo S က, ကျွန်တော်နဲ့ Vitali, G, Modenini က F, Biagiotti G. အ Carnitine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုထဲမှာအန်ဒရိုဂျင်အုပ်ချုပ်ရေး, စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်နှင့်အထီးအိုမင်းနှင့်ဆက်စပ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှိုင်းယှဉ်။ Urology ။ 2004; 63 (4): 641-6 ။ Doi: 10.1016 / j.urology.2003.11.009 ။ [PubMed]
49 ။ Merza Z ကို, Blumsohn တစ်ဦးက, Mah pm တွင်, Mead DM, McKenna SP, Wylie K သည်, et al ။ နယ်စပ်ဒေသ hypogonadism နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်အရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း patch ကိုကုထုံး၏ double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ int J ကို Androl ။ 2006; 29 (3): 381-91 ။ Doi: 10.1111 / j.1365-2605.2005.00612.x ။ [PubMed]
50 ။ ချင်းမိုင် HS, Hwang TI, Hsui YS, လင်း YC, Chen ကသူ, Chen က GC, et al ။ Transdermal testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူထိုင်ဝမ် hypogonadal အမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2007; 19 (4): 411-7 ။ Doi: 10.1038 / sj.ijir.3901562 ။ [PubMed]
51 ။ Seidman SN, Orr, G, Raviv, G, လေဝိ R ကို, Roose SP, Kravitz အီး, et al ။ ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု: dysthymia နှင့်အတူလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2009; 29 (3): 216-21 ။ Doi: 10.1097/JCP.0b013e3181a39137 ။ [PubMed]
52 ။ Giltay EJ, Tishova YA, Mskhalaya GJ, Gooren LJ, Saad က F, Kalinchenko SY ။ အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူ hypogonadal အမျိုးသားများတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုလိင် Med ။ 2010;7(7): 2572-82 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2010.01859.x ။ [PubMed]
et al 53 Srinivas-Shankar U, Roberts SA, Connolly MJ, O'Connell MD, Adams JE, Oldham JA ။ testosterone ဟော်မုန်း၏ကြံ့ခိုင်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အသက်အရွယ်မရွေးအားနည်းသော၊ အားနည်းသောသက်ကြီးရွယ်အိုများအသက်တာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကျပန်း၊ မျက်စိကန်းသော၊ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2010; 95 (2): 639-50 ။ Doi: 10.1210 / jc.2009-1251 ။ [PubMed]
54 ။ Hackett, G, ကိုးလ် N ကို, Bhartia M က, ကနေဒီ, D, Raju J ကို long-သရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate နှင့်အတူ Wilkinson P. testosterone အစားထိုးကုထုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူယောက်ျား၏လူဦးရေအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs. အရည်အသွေးကို-of ဘဝ parameters တွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ J ကိုလိင် Med ။ 2013; 10 (6): 1612-27 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12146 ။ [PubMed]
55 ။ Buvat J ကို, Montorsi က F, မဂ္ဂီကို M, Porst H ကို, Kaipia တစ်ဦးက, Colson MH, et al ။ Hypogonadal ယောက်ျား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (TADTEST လေ့လာမှု) ၏ကုသမှုထဲမှာ 5% hydroalcoholic testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်လ်နှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏ပုံမှန်ကနေ PDE1 inhibitor tadalafil အကျိုးကျေးဇူးမှ nonresponders ။ J ကိုလိင် Med ။ 2011; 8 (1): 284-93 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2010.01956.x ။ [PubMed]
56 ။ Steidle ကို C, Schwartz က S, Jacoby K ကို Sebree T က, စမစ် T က, Bachand R ကို, et al ။ AA2500 testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူယောက်ျားအိုမင်းအတွက်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ပုံမှန်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2003; 88 (6): 2673-81 ။ Doi: 10.1210 / jc.2002-021058 ။ [PubMed]
57 ။ Legros JJ, Meuleman EJ, Elbers JM, Geurts တီဘီ, Kasper MJ, Bouloux pm တွင်, et al ။ လက်ခဏာနှောင်းပိုင်းတွင်-စတင်ခြင်း hypogonadism အတွက်ခံတွင်း testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး: တစ်ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုမှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံနှင့်အထွေထွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2009; 160 (5): 821-31 ။ Doi: 10.1530 / EJE-08-0634 ။ [PubMed]
58 ။ Hackett, G, ကိုးလ် N ကို, Bhartia M က, ကနေဒီ, D, Raju J ကို, Wilkinson P ကို, et al ။ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ရန်တုံ့ပြန်မှုတံခါးခုံကိုသွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့် (ထိုပေါက်ကွဲမှုလေ့လာမှု) ရရှိအပေါ်မှီခိုသည်။ int J ကို Clin Pract ။ 2014; 68 (2): 203-15 ။ Doi: 10.1111 / ijcp.12235 ။ [PubMed]
59 ။ Schiavi RC, အဖြူရောင် D ကို, Mandeli J ကို, Levine AC အ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ခံစားချက်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေး effect ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1997; 26 (3): 231-41 ။ [PubMed]
60 ။ Snyder PJ, Bhasin S က, Cunningham ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Matsumoto လေး, Stephens-Shields AJ, Cauley ဂျာ et al ။ အသက်ကြီးအမျိုးသားများအတွက် testosterone ကုသမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ N ကို Engl J ကို Med ။ 2016; 374 (7): 611-24 ။ Doi: 10.1056 / NEJMoa1506119 ။ [PubMed]
61 ။ Chung T က, Kelleher S ကိုလျူ py, Conway AJ, Kritharides L ကို, Handelsman DJ သမား။ နှလုံး function ကိုအပေါ် Testosterone နဲ့ nandrolone ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ်ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ Clin Endocrinol (Oxf) ။ 2007; 66 (2): 235-45 ။ Doi: 10.1111 / j.1365-2265.2006.02715.x ။ [PubMed]
62 ။ Benkert အို Witt W ကအာဒံ W က, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်နှင့်သင်ျခြိုယောက်ျား၏ hypothalamic-pituitary-gonadal ဝင်ရိုးအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ၏ Leitz အေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1979; 8 (6): 471-9 ။ [PubMed]
63 ။ Anderson က RA, Bancroft J ကို, Wu FC အသင်း။ သာမန်ယောက်ျား၏လိင်နှင့်ခံစားချက်အပေါ် exogenous testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1992; 75 (6): 1503-7 ။ [PubMed]
64 ။ Aydin S က, Odabaşအို Ercan M က, Kara H ကို, Ağargün MY ။ Non-အော်ဂဲနစ်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ကုသမှု testosterone ဟော်မုန်း, trazodone နှင့်ညှို့အကြံပြုချက်၏ထိရောက်မှု။ br J ကို Urol ။ 1996; 77 (2): 256-60 ။ [PubMed]
65 ။ Dobs AS, ဟူးဗား DR, Chen က MC, Allen က R. Pharmacokinetic ဝိသေသလက္ခဏာများ, ထိရောက်မှုနှင့် hypogonadal ယောက်ျားအတွက် buccal testosterone ဟော်မုန်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေး: တစ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1998; 83 (1): 33-9 ။ [PubMed]
66 ။ ပန်းခြံ NC, ယန် BQ, Chung JM, Lee က KM ။ ခံတွင်း testosterone ဟော်မုန်း undecanoate (Andriol) ဖြည့်စွက်ကုထုံး testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့နှင့်အတူယောက်ျားသည်အသက်၏အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2003;6(2): 86-93 ။ [PubMed]
67. O'Connor DB, Archer J, Wu FC ။ testosterone ဟော်မုန်း၏စိတ်ဓာတ်၊ ကျူးကျော်မှုနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ - မျက်မမြင်နှစ် ဦး၊ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2004; 89 (6): 2837-45 ။ Doi: 10.1210 / jc.2003-031354 ။ [PubMed]
68 ။ Shabsigh R ကို, Kaufman JM, Steidle ကို C တစ်ယောက်တည်း sildenafil တုံ့ပြန်မ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားအတွက် sildenafil မှတွဲဖက်ကုထုံးအဖြစ် testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်၏ Padma-သန်အိပ်ချ်ကျပန်းလေ့လာမှု။ J ကို Urol ။ 2008; 179 (5 ပျော့ပျောင်း): S97-S102 ။ Doi: 10.1016 / j.juro.2008.03.145 ။ [PubMed]
69 ။ haren M က, ချပ်မန်းငါ Coates P ကို, Morley J ကို, 12 လပါးစပ် testosterone ဟော်မုန်း၏ Wittert G. အ Effect testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့ရောဂါလက္ခဏာပေါ်အနိမ့်-ပုံမှန် gonadal status ကိုအတူလက်ခဏာသကျကွီးရှယျအိုမြားယောက်ျား၌တည်၏။ အသက်အရွယ်အို။ 2005; 34 (2): 125-30 ။ Doi: 10.1093 / အိုမင်း / afi003 ။ [PubMed]
70 ။ အယ်လန်, CA, Forbes မဂ္ဂဇင်း EA ၏, Strauss BJ, McLachlan RI က။ testosterone ကုထုံးနိမ့်ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့ခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူယောက်ျားအိုမင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးပွားစေပါသည်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2008; 20 (4): 396-401 ။ Doi: 10.1038 / ijir.2008.22 ။ [PubMed]
71 ။ Emmelot-Vonk MH, Verhaar HJ, Nakhai-လောင်း HR, Grobbee DE, ဗန် der Schouw YT ။ အိုမင်းအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်6လထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2009; 21 (2): 129-38 ။ Doi: 10.1038 / ijir.2009.5 ။ [PubMed]
72 ။ Morales တစ်ဦးက, Black ကတစ်ဦး, အီမာဆန်က L, Barkin J ကို, Kuzmarov ငါနေ့အေအန်ဒရိုဂျင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် dehydroepiandrosterone vs. testosterone ဟော်မုန်း၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled Random, ကို double-မျက်စိကန်းသောလေ့လာမှု။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2009; 12 (4): 104-12 ။ Doi: 10.3109 / 13685530903294388 ။ [PubMed]
73 ။ ဟို CC ကို, Tong SF, အနိမျ့ WY, Ng သည် CJ, Khoo EM, Lee က VK, et al ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled တရားစီရင်မှုအိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသားလက္ခဏာများစကေးများကအကဲဖြတ်အဖြစ်။ BJU Int ။ 2011; 110 (2): 260-5 ။ Doi: 10.1111 / j.1464-410X.2011.10755.x ။ [PubMed]
74 ။ Spitzer M က, Basaria S က, et al Travison TG, Davda MN, Paley တစ်ဦးက, Cohen ကို B ကို။ တစ်ဦးအပြိုင်, ကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေး: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် sildenafil citrate တုံ့ပြန်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အမ်း International Med ။ 2012; 157 (10): 681-91 ။ Doi: 10.7326/0003-4819-157-10-201211200-00004 [PubMed]
75 ။ et al del Fabbro အီး, Garcia က JM, Dev မှ R ကို, Hui: D, ဝီလျံဂျေ, အင်ဂျင်နီယာချုပ်: D ။ အဆင့်မြင့်ကင်ဆာနှင့်အတူ hypogonadal လူနာယောက်ျားအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်များအတွက် testosterone အစားထိုး: တစ်ပဏာမကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ ပံ့ပိုးမှုစောင့်ရှောက်မှုကင်ဆာ။ 2013; 21 (9): 2599-607 ။ Doi: 10.1007/s00520-013-1832-5 ။ [PubMed]
76 ။ Gianatti EJ, Dupuis P ကို, Hoermann R ကို, Zajac JD, testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု Grossmann အမ် Effect အခြေခံဥပဒေနှင့်လိင်ရောဂါလက္ခဏာပေါ်တစ်ဦးကိုကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2014; 99 (10): 3821-8 ။ Doi: 10.1210 / jc.2014-1872 ။ [PubMed]
77 ။ Basaria S က, Travison TG, Alford: D, Knapp PE, Teeter K ကို Cahalan က C, et al ။ opioid-သွေးဆောင်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများ: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ နာကျင်မှု။ 2015; 156 (2): 280-8 ။ Doi: 10.1097 / 01.j.pain.0000460308.86819.aa ။ [PubMed]
78 ။ Paduch DA, Polzer PK, နီက X, Ejaculatory အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူအန်ဒရိုဂျင်-ချို့တဲ့အမျိုးသားများအတွက် Basaria အက်စ် testosterone အစားထိုး: ကျပန်းထိန်းချုပ်စမ်းသပ်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2015; 100 (8): 2956-62 ။ Doi: 10.1210 / jc.2014-4434 ။ [PubMed]
79 ။ Holmäng S က, Marine P ကို, Lindstedt, G, eugonadal လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်ဆီးကြိတ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်သွေးရည်ကြည်ဆီးကျိတ်-တိကျတဲ့ကိုပဲအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်ရေရှည်ပါးစပ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ကုသမှု Hedelin အိပ်ချ် Effect ။ ဆီးကျိတ်။ 1993; 23 (2): 99-106 ။ [PubMed]
80 ။ et al Kenny လေး, Kleppinger တစ်ဦးက, Annie K ကို Rathier M က, Browner B, တရားသူကြီး Jo ။ အရိုးနှင့်ကြွက်သားအနိမ့် bioavailable testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသက်ကြီးအတွက်အနိမ့်အရိုးထုထည်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြို့တဲ့အပေါ် transdermal testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ J ကို Am သက်ကြီးရွယ်အိုများ Soc ။ 2010; 58 (6): 1134-43 ။ Doi: 10.1111 / j.1532-5415.2010.02865.x ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC3014265 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
81 ။ စာမျက်နှာ ST, Amory JK, Bowman FD, Anawalt bd, Matsumoto လေး, Bremner WJ, et al ။ Exogenous testosterone ဟော်မုန်း (T) ကိုတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ် finasteride နှင့်အတူအနိမ့်သွေးရည်ကြည် T. J ကို Clin Endocrinol Metab နှင့်အတူအသက်ကြီးအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှု, ချုပ်ကိုင်ထားတန်ခိုးတော်ကို၎င်း, ပိန်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုတိုးပွားစေပါသည်။ 2005; 90 (3): 1502-10 ။ Doi: 10.1210 / jc.2004-1933 ။ [PubMed]
82 ။ Sullivan က DH, Roberson PK, ဂျွန်ဆင် LE, Bishara အိုအီဗန် WJ, Smith က ES, et al ။ ပိုငျးအခွားကို၎င်းငျးသက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားအတွက်ကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိကိုသင်တန်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ Med သိပ္ပံအားကစား Exerc ။ 2005; 37 (10): 1664-72 ။ Doi: 10.1249 / 01.mss.0000181840.54860.8b [PubMed]
83 ။ Travison TG, Basaria S က, Storer TW, Jette လေး, Miciek R ကို, Farwell WR, et al ။ ကြွက်သားစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ရွေ့လျားန့်အသတ်နှင့်အတူအသက်ကြီးအတွက် testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများလက်တွေ့အဓိပ္ပါယ်ရှိသော။ J ကို Gerontol တစ်ဦးက Biol သိပ္ပံ Med သိပ္ပံ။ 2011; 66 (10): 1090-9 ။ Doi: 10.1093 / gerona / glr100 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC3202898 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
84 ။ Casaburi R ကို, Bhasin S က, Cosentino L ကို, Porszasz J ကို, Somfay တစ်ဦးက, Lewis က MI, et al ။ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် Testosterone နဲ့ခုခံရေးသင်တန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို respiration Crit စောင့်ရှောက် Med ဖြစ်၏။ 2004; 170 (8): 870-8 ။ Doi: 10.1164 / rccm.200305-617OC ။ [PubMed]
85 ။ Okun က MS, ဖာနန်ဒက်ဇနာရီ, Rodriguez RL, Romrell J ကို, Suelter M က, Munson S က, et al ။ ပါကင်ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ကုထုံး: အ TEST-PD လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ Arch Neurol ။ 2006; 63 (5): 729-35 ။ [PubMed]
86 ။ Amory JK, Chansky HA, Chansky KL, Camuso MR, Hoey မှန် CT, Anawalt bd, et al ။ ဒူးကိုအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူအသက်ကြီးအတွက် Preoperative supraphysiological testosterone ဟော်မုန်း။ J ကို Am သက်ကြီးရွယ်အိုများ Soc ။ 2002; 50 (10): 1698-701 ။ [PubMed]
87 ။ Schwartz JB, Volterrani M က, Caminiti, G, Marazzi, G, Fini M က, Rosano GM က, et al ။ နာတာရှည်နှလုံးပျက်ကွက်နှင့်အတူအသက်ကြီးနှင့်အထက်အမျိုးသမီးတွေအတွက် QT ကြားကာလအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ int J ကို Androl ။ 2011; 34 (5 Pt 2): e415-21 ။ Doi: 10.1111 / j.1365-2605.2011.01163.x ။ [PubMed]
88 ။ ခရော BA, လျူ py, Keane MT, Bleasel JF, Handelsman DJ သမား။ ရေရှည်စနစ်တကျ glucocorticoid ကုသမှုလိုအပ်အမျိုးသားများတွင်ကြွက်သားနှင့်အရိုးပေါ်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှု၏ကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2003; 88 (7): 3167-76 ။ Doi: 10.1210 / jc.2002-021827 ။ [PubMed]
89 ။ Griggs RC, Pandya S က, Florence JM, Brooke MH, Kingston W က, Miller က JP, et al ။ myotonic dystrophy အတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏ထိန်းချုပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ အာရုံကြော။ 1989; 39 (2 Pt 1): 219-22 ။ [PubMed]
90 ။ Bakhshi V ကို, Elliott သည် M က, Gentili တစ်ဦးက, Godschalk M က, Mulligan တီ testosterone နေမကောင်းအသက်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရလဒ်များပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ J ကို Am သက်ကြီးရွယ်အိုများ Soc ။ 2000; 48 (5): 550-3 ။ [PubMed]
91 ။ Emmelot-Vonk MH, Verhaar HJ, Nakhai et al HR, Aleman တစ်ဦးက, Lock ကို TM, Bosch ရဲ့ JL, လောင်း။ အလုပ်လုပ်တဲ့ mobility, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အသက်ကြီးတခြား parameters တွေကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2008; 299 (1): 39-52 ။ Doi: 10.1001 / jama.2007.51 [PubMed]
92 ။ Brill KT, Weltman AL, Gentili တစ်ဦးက, Patrie JT, Fryburg DA, Hanks JB, et al ။ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှု, ခံစားချက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, အရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်, ကျန်းမာအသက်ကြီးအတွက်ကြွက်သားမျိုးဗီဇစကားရပ်၏အစီအမံအပေါ်ကြီးထွားဟော်မုန်းများနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေးလူပျိုများနှင့်ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2002; 87 (12): 5649-57 ။ Doi: 10.1210 / jc.2002-020098 ။ [PubMed]
93 ။ Ferrando AA ကို, ရှက်ဖီး-Moore က M ကို, Wolf က SE, Herndon DN, ဝံပုလွေ RR ။ ပြင်းထန်သောမီးလောင်ဒဏ်ရာများအတွက် testosterone အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်သား catabolism ameliorates ။ Crit စောင့်ရှောက် Med ။ 2001; 29 (10): 1936-42 ။ [PubMed]
94 ။ Hildreth KL, Barry DW, Moreau KL, Vande Griend J ကို, Meacham RB, Nakamura T က, et al ။ အနိမ့်-ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကျန်းမာ, အလွန်အမင်း functioning အသက်ကြီးအတွက် Testosterone နဲ့တိုးတက်သောခုခံလေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2013; 98 (5): 1891-900 ။ ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC3644594 ။ Doi: 10.1210 / jc.2012-3695 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
95. Nair KS, Rizza RA, O'Brien P, Dhatariya K, Short KR, Nehra A, et al ။ သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးများအတွက် DHEA နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း။ N Engl J ကို Med ။ 2006; 355 (16): 1647-59 ။ [PubMed]
96 ။ Snyder PJ, Peachey H ကို, Hannoush P ကိုဘာလင်ဂျာ Loh သည် L ကို, ကေတီဟုမ်း JH, et al ။ အသက် 65 နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများတွင်အရိုးဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု effect ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1999; 84 (6): 1966-72 ။ [PubMed]
97 ။ Wittert GA တ, ချပ်မန်းရဲ့ IM, haren MT, Mackintosh S က, Coates P ကို, Morley je ။ ခံတွင်း testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်ကြွက်သားတိုးပွါးခြင်းနှင့်အနိမ့်ပုံမှန် gonadal status ကိုနှင့်အတူကျန်းမာသန်စွမ်းသက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားအတွက်အဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်လျော့နည်းစေပါသည်။ J ကို Gerontol တစ်ဦးက Biol သိပ္ပံ Med သိပ္ပံ။ 2003; 58 (7): 618-25 ။ [PubMed]
98 ။ Bhasin S က, et al က Parker RA, Sattler က F, Haubrich R ကို, Alston B, Umbleja T က။ တကိုယ်လုံးနှင့်ဝမ်းဗိုက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူလူ့ immunodeficiency virus ကို-ကူးစက်အမျိုးသားများတွင်ဒေသဆိုင်ရာအဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်ဖြန့်ဖြူးအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2007; 92 (3): 1049-57 ။ Doi: 10.1210 / jc.2006-2060 ။ [PubMed]
99 ။ Bhasin S က, et al Storer TW, Javanbakht M က, Berman N ကို, Yarasheski Ke, Phillips က J ကို။ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ HIV ပိုးကူးစက်အမျိုးသားများတွင် testosterone အစားထိုးခြင်းနှင့်ခုခံရေးလေ့ကျင့်ခန်း။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2000; 283 (6): 763-70 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100 ။ et al Grinspoon S က, Corcoran က C, Askari H ကို, Schoenfeld: D, Wolf က L ကို, Burrow B က။ အေအိုင်ဒီအက်စ်ပိန် syndrome ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်အန်ဒရိုဂျင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ အမ်း International Med ။ 1998; 129 (1): 18-26 ။ [PubMed]
101 ။ Grinspoon S က, et al Corcoran က C, Parlman K ကို Costello က M, Rosenthal: D, Anderson ကအီး။ AIDS ရောဂါပိန်နှင့်အတူ eugonadal အမျိုးသားများတွင် Testosterone နဲ့တိုးတက်သောခုခံသင်တန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ကျပန်း, ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ အမ်း International Med ။ 2000; 133 (5): 348-55 ။ [PubMed]
102 ။ Borst SE, Yarrow JF, ဖာနန်ဒက်ဇကို C, Conover CF, ရဲက F, Meuleman JR, et al ။ အဟောင်းတွေ hypogonadal အမျိုးသားများတွင် Testosterone နဲ့ finasteride အုပ်ချုပ်ရေးသိမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ အိုမင်းခြင်းဟာ Clin Interval ။ 2014; 9: 1327-33 ။ Doi: 10.2147 / CIA.S61760 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC4136953 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
103 ။ Bhasin S က, et al Storer TW, Asbel-Sethi N ကို, Kilbourne တစ်ဦးက, Hays R ကို, Sinha-Hikim ငါ။ အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလူ့ immunodeficiency virus ကို-ကူးစက်ယောက်ျားတစ်ဦး nongenital, transdermal စနစ်, Androderm နှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1998; 83 (9): 3155-62 ။ [PubMed]
104 ။ Sih R ကို, Morley je, ခိုင်ဆာ FE, ပယ်ရီ HM 3rd, ပက်ထရစ် P ကို, အဟောင်းတွေ hypogonadal ယောက်ျားအတွက် Ross က C. testosterone အစားထိုး: တစ် 12 လထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1997; 82 (6): 1661-7 ။ [PubMed]
105 ။ Coodley GO, Coodley MK ။ HIV ပိုး-ဆက်စပ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံး၏တစ်ဦးကစမ်းသပ်။ AIDS ရောဂါ။ 1997; 11 (11): 1347-52 ။ [PubMed]
106 ။ Sardar P ကို, Jha တစ်ဦးက, ရွိုင်း: D, Majumdar ဦး, Guha P ကို, ရွိုင်းက S, et al ။ ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး: syndrome ရောဂါ (AWS) ဖြုန်းအေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးက HIV လူနာများအတွက် nandrolone နှင့် testosterone ဟော်မုန်း၏ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ HIV ပိုး Clin စမ်းသပ်မှု။ 2010; 11 (4): 220-9 ။ Doi: 10.1310 / hct1104-220 ။ [PubMed]
107 ။ ဖဲရ်ဖီးလ်က WP, M ကိုဆက်ဆံ, et al Rosenthal ကပစ, Frontera W က, Stanley T က, Corcoran က C ။ AIDS ရောဂါပိန်နှင့်အတူ eugonadal အမျိုးသားများတွင်ကြွက်သားဆုကိုအပေါ် Testosterone နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ J ကို Apple က Physiol (1985) ။ 2001; 90 (6): 2166-71 ။ [PubMed]
108 ။ Kouri EM, လောနိတျမွို့ SE, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG Jr က Oliva ဆာ။ တဖြည်းဖြည်း testosterone ဟော်မုန်း cypionate ၏ဆေးများတိုးပွားလာ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပါအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်တုံ့ပြန်ရန်လိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1995; 40 (1): 73-9 ။ [PubMed]
109 ။ Daly RC, စု TP, Schmidt က PJ, Pickar: D, Murphy က DL, Rubinow DR ။ methyltestosterone အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် Cerebrospinal အရည်နှင့်အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကို: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 58 (2): 172-7 ။ [PubMed]
110 ။ Dabbs JM, Karpas AE, Dyomina N ကို, Juechter J ကို, ရောဘတ်အေစမ်းသပ် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်သို့မဟုတ်လျှော့ချသာမန်ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်ခံစားချက်သက်ရောက်သည်။ လူမှုအပြုအမူများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ 2002; 30 (8): 795-806 ။
111 ။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG ဂျူနီယာ Amiaz R ကို, နန်ကို BP, Orr, G, Weiser M က, ကယ်လီ JF, et al ။ စံလက္ခဏာကုသမှုမပြည့်စုံသောတုန့်ပြန်ပြသသည့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်၏စင်ပြိုင်အုပ်စုရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2010; 30 (2): 126-34 ။ Doi: 10.1097/JCP.0b013e3181d207ca ။ [PubMed]
112 ။ Vaughan ကို C, စတိန်းအသင်း, Tenover JL ။ Exogenous testosterone ဟော်မုန်းတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ် finasteride နှင့်အတူအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူကျန်းမာအသက်ကြီးအတွက်သိမှတ်ခံစားမှု၏တိုင်းတာတိုးတက်စေမထားဘူး။ J ကို Androl ။ 2007; 28 (6): 875-82 ။ Doi: 10.2164 / jandrol.107.002931 ။ [PubMed]
113 ။ Dobs AS, Cofrancesco J ကို, Nolten WE, Danoff တစ်ဦးက, et al Anderson က R ကို, Hamilton က CD ကို။ လူ့ immunodeficiency ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမှဆက်စပ်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူလူနာကုသမှုထဲမှာ transscrotal testosterone ဟော်မုန်းပေးပို့စနစ်၏အသုံးပြုခြင်း။ နံနက် J ကို Med ။ 1999; 107 (2): 126-32 ။ [PubMed]
114 ။ Janowksy JS, Oviatt SK ကို, Orwoll ES ။ testosterone အသက်ကြီးအတွက် Spatial သိမှတ်ခံစားမှုသြဇာလွှမ်းမိုး။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1994; 108 (2): 325-32 ။ [PubMed]
115 ။ Bhasin S က, et al Storer TW, Berman N ကို, Callegari ကို C, Clevenger B, Phillips က J ကို။ သာမန်ယောက်ျားအတွက်ကြွက်သားအရွယ်အစားနှင့်ခွန်အားကို testosterone ဟော်မုန်း၏ supraphysiologic ဆေးများ၏ဆိုးကျိုးများ။ N ကို Engl J ကို Med ။ 1996; 335 (1): 1-7 ။ [PubMed]
116 ။ Tricker R ကို, Casaburi R ကို, et al Storer TW, Clevenger B, Berman N ကို, တစ်ခါတစ်ဦးက။ လက်တွေ့သုတေသနစင်တာလေ့လာမှုကျန်းမာ eugonadal-တစ်ဦးယောက်ျားအတွက်အမျက်ထွက်အပြုအမူအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ supraphysiological ဆေးများ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1996; 81 (10): 3754-8 ။ [PubMed]
117. O'Connor DB, Archer J, Hair WM, Wu FC ။ eugonadal နှင့် hypogonadal အမျိုးသားများအတွက် Exogenous testosterone ဟော်မုန်း၊ Physiol Behav ။ 2002; 75 (4): 557-66 ။ [PubMed]
118 ။ Kunelius P ကို, Lukkarinen အို Hannuksela ML, Itkonen အို Tapanainen JS ။ အိုမင်းအထီးအတွက် transdermal dihydrotestosterone ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ်အလားအလာ Random, နှစ်ဆမျက်စိကန်းသောလေ့လာမှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2002; 87 (4): 1467-72 ။ [PubMed]
119 ။ haren MT, Wittert GA တ, ချပ်မန်းရဲ့ IM, Coates P ကို, Morley je ။ အနိမ့်-ပုံမှန် gonadal status ကိုအတူသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားများတွင်အသက်တာ၏ visuospatial သိမှတ်ခံစားမှု, ခံစားချက်နှင့်အရည်အသွေးပေါ်ပါးစပ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Maturitas ။ 2005; 50 (2): 124-33 ။ Doi: 10.1016 / j.maturitas.2004.05.002 ။ [PubMed]
120 ။ maki pm တွင်, Ernst M က, လန်ဒန် ED, မော်ဒကဲသည် KL, Perschler P ကို, Durso SC, et al ။ သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားများတွင်အသား testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု: မှတ်ဥာဏ်ကျဆင်းမှု၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ပြောင်းလဲဦးနှောက် function ကို။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2007; 92 (11): 4107-14 ။ Doi: 10.1210 / jc.2006-1805 ။ [PubMed]
121 ။ Reddy P ကို, White, CM, Dunn AB, Moyna မိုင်, Thompson က PD ။ လေယာဉ်မှူးလေ့လာမှုသက်ကြီးရွယ်အိုများ-တစ်ဦးယောက်ျားဘဝကနျြးမာရေး-related အရည်အသွေးပေါ် testosterone ဟော်မုန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Clin Pharm Ther ။ 2000; 25 (6): 421-6 ။ [PubMed]
122 ။ Zak PJ, Kurzban R ကို, Ahmadi က S, Swerdloff RS, ပန်းခြံ J ကို, Efremidze L ကို, et al ။ testosterone အုပ်ချုပ်ရေးရာဇသံကိုဂိမ်းအတွက်ရက်ရောမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2009;4(12): e8330 Doi: 10.1371 / journal.pone.0008330 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC2789942 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
123 ။ ko YH, Lew YM, Jung SW, ဂျိုး SH, Lee က CH, Jung HG, et al ။ အထီး schizophrenics အတွက် short-term testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွား: တစ်ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2008; 28 (4): 375-83 ။ Doi: 10.1097/JCP.0b013e31817d5912 ။ [PubMed]
124 ။ Kenny လေး, ဖာဘရီဂက်စ်, G, သီချင်း, C, Biskup B က, အမူအကျင့်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့်သိမြင်မှု function ကို၏ Bellantonio အက်စ်အကျိုးသက်ရောက်မှုပျော့သိမြင်မှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အတူအသက်ကြီးပါတယ်။ J ကို Gerontol တစ်ဦးက Biol သိပ္ပံ Med သိပ္ပံ။ 2004; 59 (1): 75-8 ။ [PubMed]
125 ။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG Jr က Cohane GH, Kanayama, G, Siegel AJ, Hudson JI ။ ဆန့်ကျင်ဘက်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားတို့အတွက် testosterone ဂျယ်ဖြည့်စွက်: တစ်ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160 (1): 105-11 ။ [PubMed]
126 ။ ကမ်းခြေဟာ MM, Kivlahan DR, Sadak TI လီ EJ, Matsumoto လေး။ subthreshold စိတ်ကျရောဂါ (dysthymia သို့မဟုတ်အသေးစားစိတ်ကျရောဂါ) နဲ့ hypogonadal အသက်ကြီးအတွက် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 70 (7): 1009-16 ။ [PubMed]
127 ။ Seidman SN, မီယာဇာကီက M, Roose SP ။ ကုသမှု-resistant နှိမ့်အမျိုးသားများအတွက်ရွေးချယ် serotonin Reuptake တားဖို့အသား testosterone ဖြည့်စွက်။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2005; 25 (6): 584-8 ။ Doi: 10.1097 / 01.jcp.0000185424.23515.e5 [PubMed]
128 ။ Orengo, CA, ဖူလာ L ကို, Kunik ME ။ လက္ခဏာကုထုံးမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းဂျယ် 1% တိုးပွား၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ထိရောက်မှု။ ဂျေသက်ကြီးရွယ်အိုများစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurol ။ 2005; 18 (1): 20-4 ။ Doi: 10.1177 / 0891988704271767 ။ [PubMed]
129 ။ Grinspoon S က, Corcoran က C, Stanley T က, Baaj တစ်ဦးက, Basgoz N ကို, HIV ပိုးကူးစက်အမျိုးသားများတွင်စိတ်ကျရောဂါညွှန်းကိန်းအပေါ် hypogonadism နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေး Klibanski အေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2000; 85 (1): 60-5 ။ [PubMed]
130 ။ Rabkin JG, Wagner GJ, McElhiney MC, Rabkin R ကို, လင်း SH ။ HIV / AIDS ရောဂါအတွက်ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်များအတွက် Fluoxetine ပီသသူရဲ့ကွာခြားချက် testosterone ။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2004; 24 (4): 379-85 ။ Doi: 10.1097 / 01.jcp.0000132442.35478.3c [PubMed]
131 ။ Cherrier MM, Asthana S က, Plymate S က, Baker L ကို, Matsumoto လေး, Peskind အီး, et al ။ testosterone ဖြည့်စွက်ကျန်းမာအသက်ကြီးအတွက် Spatial နှင့်နှုတ်မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အာရုံကြော။ 2001; 57 (1): 80-8 ။ [PubMed]
132 ။ Cherrier MM, Matsumoto လေး, Amory JK, Asthana S က, Bremner W က, Peskind အီး, et al ။ testosterone အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်ပျော့သိမြင်မှုချို့ယွင်းနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် Spatial မှတ်ဥာဏ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အာရုံကြော။ 2005; 64 (12): 2063-8 ။ [PubMed]
133 ။ ဝံပုလွေညီလေး, Preut R ကို, Hellhammer DH, Kudielka BM, Schürmeyer TH K သည် C. Testosterone နဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားတွေအတွက်သိမှတ်ခံစားမှု: တစ်ခုတည်း testosterone ဟော်မုန်းဆေးထိုးလုပ်ကွက်နှုတ် fluency အတွက်အလေ့အကျင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ဒါပေမယ့် Spatial သို့မဟုတ်နှုတ်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 47 (7): 650-4 ။ [PubMed]
134. O'Connor DB, Archer J, Hair WM, Wu FC ။ ယောက်ျား၌သိမြင်မှု function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ activational သက်ရောက်မှု။ Neuropsychologia ။ 2001; 39 (13): 1385-94 ။ [PubMed]
135 ။ Janowsky JS, ချားဗေ့စ်ခ, Orwoll အီးလိင် steroids အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2000; 12 (3): 407-14 ။ [PubMed]
136 ။ Cherrier MM, Matsumoto လေး, Amory JK, Ahmed က S နဲ့, Bremner W က, Peskind ER, et al ။ testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်အတွက်မွှေးကြိုင်၏အခန်းကဏ္ဍကို: အသက်ကြီးအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အာရုံကြော။ 2005; 64 (2): 290-6 ။ [PubMed]
137 ။ Kenny လေး, Bellantonio S က, Gruman, CA, Acosta RD, Prestwood KM ။ အနိမ့် bioavailable testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသက်ကြီးအတွက်သိမြင်မှု function ကိုနှင့်ကျန်းမာရေးအမြင်အပေါ် transdermal testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ J ကို Gerontol တစ်ဦးက Biol သိပ္ပံ Med သိပ္ပံ။ 2002; 57 (5): M321-5 ။ [PubMed]
138. Tan က RS, Pu SJ ။ hypogonadal သက်ကြီးရွယ်အိုအထီးလူနာများတွင် testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတစ်ခု Alzheimer ရောဂါနှင့်အတူ။ အိုမင်းခြင်းအမျိုးသား 2003;6(1): 13-7 ။ [PubMed]
139 ။ Cherrier MM, Anderson တို့ K ကို Shofer J ကို, Millard S က, Matsumoto လေး။ ပျော့သိမြင်မှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူယောက်ျား၏ testosterone ကုသမှု။ ဂျေမားရောဂါ dis အခြား Demen ဖြစ်၏။ 2015; 30 (4): 421-30 ။ Doi: 10.1177 / 1533317514556874 ။ [PubMed]
140 ။ Cherrier MM, Matsumoto လေး, Amory JK, ဂျွန်ဆင်က M, Craft က S, Peskind ER, et al ။ အလယ်အလတ်ကနေကျန်းမာတဲ့အသက်ကြီးအတွက်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအတွက် supraphysiological တိုးမှနှုတ်နှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်ပြောင်းလဲမှုများစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2007; 32 (1): 72-9 ။ Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2006.10.008 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC1864939 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
141 ။ Xu L ကို, Freeman က, G, Cowling BJ, ကျောင်း CM ။ လူတို့တွင် testosterone ကုထုံးနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ကျပန်းစမ်းသပ်မှုတွေ၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်။ BMC Med ။ 2013; 11: 108 Doi: 10.1186/1741-7015-11-108 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
142. Vigen R, O'Donnell CI, Baron AE, Grunwald GK, Maddox TM, Bradley SM ။ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုနှင့်သေဆုံးမှု၊ myocardial infarction နှင့် testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်သောအမျိုးသားများအတွက်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု။ ဂျမေ 2013; 310 (17): 1829-36 ။ Doi: 10.1001 / jama.2013.280386 ။ [PubMed]
143 ။ Sharma က R ကို, ONI oa, Gupta K ကိုချန်, G, Sharma က M ကို, Dawn B, et al ။ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ပုံမှန်ယောက်ျားအတွက် myocardial infarction နှင့်သေဆုံးမှု၏လျော့ချဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ EUR နှလုံးဂျေ 2015; 36 (40): 2706-15 ။ Doi: 10.1093 / eurheartj / ehv346 ။ [PubMed]
144 ။ Anderson က JL, မေလ HT, Lappe DL, Bair T က, က Le V ကို, Carlquist JF, et al ။ testosterone အစားထိုး Myocardial Infarction အပေါ်ကုထုံး, လေဖြတ်ခြင်း, တစ်ဦးပေါင်းစည်းကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အတွက်အနိမျ့ testosterone ပြင်းအားနှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက်မရဏ၏သက်ရောက်မှု။ နံနက် J ကို Cardiol ။ 2016; 117 (5): 794-9 ။ Doi: 10.1016 / j.amjcard.2015.11.063 ။ [PubMed]
145 ။ Baillargeon J ကို, မြို့ပြ RJ, Kuo က YF, Ottenbacher KJ, Raji MA, ဒူက F, et al ။ testosterone ကုထုံးလက်ခံခြင်းအသက်ကြီးအမျိုးသားများအတွက် Myocardial Infarction ၏အန္တရာယ်။ အမ်း Pharmacother ။ 2014; 48 (9): 1138-44 ။ Doi: 10.1177 / 1060028014539918 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC4282628 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
146 ။ ကမ်းခြေဟာ MM, Smith က NL, Forsberg CW, Anawalt bd, Matsumoto လေး။ အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ကုသမှုနှင့်သေဆုံးမှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2012; 97 (6): 2050-8 ။ Doi: 10.1210 / jc.2011-2591 ။ [PubMed]
147 ။ Muraleedharan V ကို, နားမှာ H ကို, Kapoor က D:, Channer KS, ဂျုံးစ် TH ။ testosterone ချို့တဲ့သေဆုံးမှုနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏တိုးချဲ့အန္တရာယ်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ရှင်သန်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2013; 169 (6): 725-33 ။ Doi: 10.1530 / EJE-13-0321 ။ [PubMed]
148 ။ Finkle WD, ဂရင်းလန်းက S, ရစ်ချ်ဝေးမောင်နှံ GK, အဒမ် JL, Frasco MA, ကွတ်ခ်ကို MB, et al ။ အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးဆေးညွှန်းအောက်ပါ Non-ဆိုးဝါး myocardial infarction ၏တိုးမြှင့်စွန့်စားမှု။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014;9(1): e85805 Doi: 10.1371 / journal.pone.0085805 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC3905977 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
149 ။ မိုင်းလုပ်သား M က, Barkin J ကို, Rosenberg က MT ။ testosterone ချို့တဲ့: ဒဏ္ဍာရီတွေ, အချက်အလက်တွေနဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ရာ။ J ကို Urol နိုင်သလား။ 2014; 21 ပျော့ပျောင်း 2: 39-54 ။ [PubMed]
150 ။ Hulley S က, Grady D ကိုသမ္မတဘုရ်ှကို T, et al Furberg ကနေ C, ဟယ်ရင်တန်: D, Riggs B က။ သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးအတွက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏အလယ်တန်းကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအီစထိုဂျင်ပေါင်း progestin ၏ကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေး။ နှလုံးနဲ့အီစထိုဂျင် / progestin အစားထိုးလေ့လာမှု (ကြှနျမ) သုတေသနအုပ်စု။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1998; 280 (7): 605-13 ။ [PubMed]
151 ။ Grady: D, ဟယ်ရင်တန်: D, Bittner V ကို, Blumenthal R ကို, Davidson က M, Hlatky M က, et al ။ ဟော်မုန်းကုထုံး၏ 6.8 နှစ်တာကာလအတွင်းနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါရလဒ်များ: နှလုံးသားနှင့်အီစထိုဂျင် / progestin အစားထိုးလေ့လာမှုနောက်ဆက်တွဲ (ကြှနျမ II ကို) ။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2002; 288 (1): 49-57 ။ [PubMed]
et al 152. Anderson က GL, Limacher M က, Assaf AR, Bassford T က, Beresford လုပ် SA, Black H ကို။ hysterectomy နှင့်အတူမီးယပ်သွေးဆုံးအမျိုးသမီးများအတွက် conjugation equine အီစထိုဂျင်၏ဆိုးကျိုးများ - အမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပဏာမခြေလှမ်းသည်ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုကိုကျပန်းလုပ်ခဲ့သည်။ ဂျမေ 2004; 291 (14): 1701-12 ။ [PubMed]
et al 153. Rossouw je, Anderson က GL, Prentice RL, LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML ။ ကျန်းမာရေးမီးမွှေးကျော့ပါးအမျိုးသမီးများအတွက်အက်စဂျင်ပေါင်းပရိုဂျက်စတာ၏အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ - အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပဏာမခြေလှမ်းမှရရှိသောအဓိကရလဒ်များ။ ဂျမေ 2002; 288 (3): 231-33 ။ [PubMed]
154 ။ အဆိုတော် N. ကြောင်းနယူး-Man Feeling ရောင်းချခြင်း။ The New York Times; 2013 ။
155 ။ Uyanik BS, Ari Z ကို, Gümüs B, Yiğitoğlu MR, Arslan T. ကြိုးကျန်းမာသက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားအတွက်လစ်ပိုပရိုတိန်း profile များကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ၏ဆိုးကျိုးများ။ တစ်ဦးကရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု။ Jpn နှလုံးဂျေ 1997; 38 (1): 73-82 ။ [PubMed]
156 ။ Tenover JS ။ အိုမင်းအထီးအတွက် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1992; 25 (4): 1092-8 ။ [PubMed]
157 ။ Kapoor က D:, Goodwin ကအီး, Channer KS, ဂျုံးစ် TH ။ testosterone အစားထိုးကုထုံးအင်ဆူလင်ကိုခုခံ, များသောထိန်းချုပ်မှု, type ကို2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားအတွက် visceral adiposity နှင့် hypercholesterolaemia ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2006; 154 (6): 899-906 ။ Doi: 10.1530 / eje.1.02166 ။ [PubMed]
158 ။ Hackett, G, ကိုးလ် N ကို, Bhartia M က, ကနေဒီ, D, Raju J ကို, Wilkinson P ကို, et al ။ ပေါက်ကွဲမှုလေ့လာမှု: testosterone အစားထိုးကုထုံးအမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါရှိသော်လည်းအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ် parameters တွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ J ကိုလိင် Med ။ 2014; 11 (3): 840-56 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12404 ။ [PubMed]
159 ။ Kouri EM, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG Jr က Oliva ဆာ။ testosterone ဟော်မုန်း cypionate ၏ဆေးများတိုးပွားလာ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပါသာမန်လူလစ်ပိုပရိုတိန်း-lipid အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများ။ Clin J ကိုအားကစား Med ။ 1996;6(3): 152-7 ။ [PubMed]
160 ။ Snyder PJ, Peachey H ကိုဘာလင်ဂျာ Rader: D, Usher: D, Loh သည် L ကို, et al ။ အသက် 65 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုအမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည် lipid နှင့် apolipoprotein အဆင့်ဆင့်အပေါ် transdermal testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု effect ။ နံနက် J ကို Med ။ 2001; 111 (4): 255-60 ။ [PubMed]
161 ။ Agledahl ငါ Hansen JB, subnormal testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားများတွင် postprandial triglyceride ဇီဝြဖစ်ပေါ် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု Svartberg ဂျေသက်ရောက်မှု။ Scand J ကို Clin Lab မှ Invest ။ 2008; 68 (7): 641-8 ။ Doi: 10.1080 / 00365510801999068 [PubMed]
162 ။ Kalinchenko SY, Tishova YA, Mskhalaya GJ, Gooren LJ, Giltay EJ သည်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း၏အမှတ်အသားများအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏ Saad အက်ဖ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အကို double-မြင်နိုင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled မော်စကိုလေ့လာမှု။ Clin Endocrinol (Oxf) ။ 2010; 73 (5): 602-12 ။ Doi: 10.1111 / j.1365-2265.2010.03845.x ။ [PubMed]
163 ။ Asih PR စနစ်, Wahjoepramono EJ, Aniwiyanti V ကို, Wijaya LK, က de Ruyck K ကို Taddei K သည်, et al ။ အဟောင်းတွေအထီးပုဂ္ဂလဒိဋ္မှတ်ဉာဏ်တိုင်ကြားအတွက် testosterone အစားထိုးကုထုံး: ဇီဝကမ္မအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းကို double-မျက်စိကန်းသောကျပန်း crossover ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လက်တွေ့စမ်းသပ်။ CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်။ 2015; 14 (5): 576-86 ။ [PubMed]
164 ။ Seidman SN, Roose SP ။ စိတ်ဓာတ်အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု: Random, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လက်တွေ့စမ်းသပ်။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2006; 32 (3): 267-73 ။ Doi: 10.1080 / 00926230600575355 ။ [PubMed]
165 ။ Clague je, Wu FC အသင်း, Horan, MA ။ အသက်ကြီးအတွက်ကြွက်သား function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်းအတွက်အခက်အခဲများ။ int J ကို Androl ။ 1999; 22 (4): 261-5 ။ [PubMed]
166 ။ Kenny လေး, Prestwood KM, Gruman, CA, Marcello KM, Raisz LG က။ အနိမ့် bioavailable testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသက်ကြီးအတွက်အရိုးနှင့်ကြွက်သားအပေါ် transdermal testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ J ကို Gerontol တစ်ဦးက Biol သိပ္ပံ Med သိပ္ပံ။ 2001; 56 (5): M266-72 ။ [PubMed]
167 ။ Borst SE, Yarrow JF, Conover CF, Nseyo ဦး, Meuleman JR, Lipinska ဂျာ et al ။ ကျပန်း, ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး: အဟောင်းတွေ hypogonadal အမျိုးသားများတွင်ပေါင်းစပ် Testosterone နဲ့ finasteride အုပ်ချုပ်ရေး Musculoskeletal နှင့်ဆီးကျိတ်ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Physiol Endocrinol Metab ဖြစ်၏။ 2014; 306 (4): E433-42 ။ Doi: 10.1152 / ajpendo.00592.2013 ; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPMC4073894 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
168 ။ Giannoulis MG, Sonksen PH သည်, Umpleby M က, Breen L ကို, ပင်တေကုတ္တေကို C, Whyte M က, et al ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသက်ကြီးရွယ်အိုများလူကြီးထွားဟော်မုန်းနှင့် / သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှု: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2006; 91 (2): 477-84 ။ Doi: 10.1210 / jc.2005-0957 ။ [PubMed]
169 ။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG Jr က Kouri EM, Hudson JI ။ သာမန်ယောက်ျားအတွက်ခံစားချက်နှင့်ကျူးကျော်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ supraphysiologic ဆေးများ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 57 (2): 133-40 ။ [PubMed]
170 ။ Cherrier MM, Plymate S က, Mohan S က, Asthana S က, Matsumoto လေး, Bremner W က, et al ။ ကျန်းမာအသက်ကြီးအတွက် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်-ငါအဆင့်ဆင့်နှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ Psychoneuroendocrinology ။ 2004; 29 (1): 65-82 ။ Doi: 10.1016/s0306-4530(02)00136-1 [PubMed]